Tu Tu Tha: September 2008
ပျော်လိုက်တာ တက်ဂိမ်းထဲ ဝင်ပါရပြန်ပြီ။ လူက ပျင်းသာပျင်းတာ အဲလိုပါလေယာလေးက လုပ်ချင်သား..ပလာတာတခြမ်းမည်းတယ် ဆိုတဲ့ ကိုဂျူလိုင်ရေ့ (အဲလိုပဲ ဂုဏ်ပုဒ်တခုခု ထည့်ပြောရတယ်ဆိုလို့) ရေးပြီဗျို့။
ဖြစ်သလိုစားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောခိုင်းတော့ အင်းစိန်ဂျီတီအိုင် အဆောင်နေ ကျောင်းသူဘဝကို သတိရတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ ဘယ်လောက်ထိ ဖြစ်သလိုလဲဆို တော်တော်ကို ဖြစ်သလိုပါ။ ကျောင်း ဆောင်က ကျွေးတာပဲ စားရတဲ့ဘဝကိုး။ ဒုတိယ နှစ်ဝက်လောက်ထိတော့ အသားဟင်း မြင်ဖူးလိုက်ပါရဲ့။ နောက်တော့ ဘဲဥတလှည့် ငါးတလှည့် ညနေခင်းများ။ ပဲဟင်း မနက်ခင်းများကို နောက်ဆုံးနှစ်ပြီးတဲ့ထိ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျောင်းမှာ ပျော်နေတာနဲ့ အဲဒါကို ဖြစ်သလိုလို့ တခါမှ မထင်ခဲ့ဘူး။ အိမ်က လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ ငပိကျော်လို၊ အမဲကျော်လိုဟာမျိုးကလည်း အားလုံးဝိုင်းတွယ်တာနဲ့ တမနက်တောင် မခံ။
ကျမက အစားအသောက်တော့ သိပ်ဂျေးမများဘူး။ ဘာဖြစ်ဖြစ်စားတယ်။ ဖြစ်သလို စားနေရတယ်လို့လည်း တခါမှ တွေးပြီး ဝမ်းမနည်းဖူးဘူး တကယ်ပါ။ ခြေလေးချောင်းထဲမှာလည်း စားပွဲတွေ ကုလားထိုင်တွေကလွဲရင် အားလုံးစား။ ခြေ ၂ ချောင်းကတော့ ပြောမနေနဲ့ ...။ ခု ထိုင်းမှာ အပြင်ထွက်စားလို့ ဘော်ဒါတွေက ဘာစားချင် စိတ်ကလေးများရှိတယ်လို့ မဖြစ်ဘူးလား မေးရင် ကျမက ဟင့်အင်းပဲ။ သူတို့မှာတာ အကုန်စားတာကိုး။ ဒီတော့ သူတို့က ကျမကို ကဲ့ရဲ့တယ်။ လူဆိုတာ ဘာလေးတော့ စားချင်လိုက်တာဆိုပြီး ရှိသင့်တယ်ပေါ့လေ (သူတို့ အဆိုအရ Plan လေးတော့ ရှိရမယ်ပေါ့)။ ခက်တာက ကျမမှာ အဲလိုကိုမရှိတာ။
မြန်မာပြည်မှာလည်း ကျမက လက်ဖက်ရည် ကောင်းကောင်းကလွဲရင် ဘာမှမမက်ဘူး။ လက်ဖက်ရည် ကောင်းကောင်းမရှိတဲ့နေရာ ရောက်သွားရင်တော့ နည်းနည်း စိတ်ညစ်တာပေါ့။ ဒီလောက်ပဲ။ (ခုလည်း တော်တော် လွမ်းတယ်)
ချဉ်ရည်ဟင်းနဲ့ ငါးပိထောင်းတော့ ကြိုက်တယ်။ ဒါလည်း မရှိမဖြစ်မဟုတ်ဘူး။ ကြုံရင်တော့ စားတယ်။ ကျမက ဘာကြိုက်ပါတယ် သိပ်မပြောတတ်ပေမယ့် ဟင်းတော့ နည်းနည်းပါးပါး ချက်တတ်ပါတယ် (ကျမအဲလို ပြောရင် သူငယ်ချင်းတွေက လုံးဝမယုံဘူး၊ ကျမကလည်း မယုံပါစေနဲ့ဘဲ ဆုတောင်းနေရတာ)။ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အချိန် မျိုးဆို သေချာအချိန်ယူပြီး ကောင်းကောင်းလေး ချက်တယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဝင်စားတဲ့ အချိန်ဆိုတာလည်း ခပ်ရှားရှားရယ်။ နောက်ပြီး ကျမရဲ့ မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းထဲမှာ အရမ်းကို ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ တယောက် ရှိတယ်။ သူရှိနေတော့ ကျမက ရေသာခိုတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ စုချက်စားပြီဆို ကျမက ယောင်ခြောက်ဆယ် လုပ်နေလိုက်ရော။ သူက တော်တော်ကြာတဲ့ထိ ကျမဘာမှ မလုပ်တတ်ဘူးထင်တာ။ နောက်မှ သိသွားပြီး သတ်သတ်မှတ်မှတ် နင်က ဘာအသုတ်သုတ်ခဲ့။ နင်က ဘာချက်ခဲ့ အဲလို ဗီတိုအာဏာနဲ့ခိုင်းတော့တာ။ ဟိ။
ကျမကံကောင်းတာက သူငယ်ချင်းယောက်ျားလေးတွေထဲမှာလည်း ဟင်းတော်တော် အချက်ကောင်းတဲ့ သူတွေရှိတယ်။ ဝါသနာလည်းတော်တော်ပါကြတာ။ ဘယ်လောက်တောင်လည်းဆိုရင် တခါ ကျမတို့ အိမ်မှာ စားကြသောက်ကြဖို့ လုပ်တော့ အဲဒီသူငယ်ချင်း ၂ ယောက်က သူတို့ဘာမှမလုပ်ဘူး ကျမပဲလုပ်ဆိုပြီး ပေပြီးနေ ကြတယ်။ ကျမကလည်း ဘာမှမလုပ်ပေးပါဘူး ကြက်ဥလေးကြော်ပေးမှာပါ အဲဒါ ကျမဆီအိုးတည်ထားတုန်း ဆီကျက်တဲ့ အနံ့လည်း ထွက်လာရော ၂ ယောက်စလုံး မီးဖိုထဲကို ပြေးလာကြတာ။ ပြီးလည်း ပြီးရော ကျမလက် ထဲက ယောင်းမကို သူယူမယ် ငါယူမယ်နဲ့ လုကြရော။ အဲလိုကောင်တွေ ရှိနေမှတော့ ကျမက အငြိမ့်ပေါ့။
နောက်ကျမက တယောက်ထဲအတွက်ဆို ဘာမှမယ်မယ်ရရ လုပ်မစားဘူး။ ပျင်းတယ်။ ဘေးမှာ စားမယ့်သူ ရှိတယ်၊ မချက်မဖြစ် ချက်ရမယ် ဆိုရင်တော့ ချက်ပေးပါတယ်။ ကိုယ့်ဗိုက်အတွက်တော့ သိပ်မယ်မယ်ရရ လုပ်မနေဘူး။ အဲဒါကို ဖြစ်သလို လို့ ပြောရင် ဖြစ်သလိုပေါ့လေ။ ဟင်းချက်ရမှာထက် ပြီးသွားရင် ရှင်းလင်း ဆေးကျောရမှာ ပိုမလုပ်ချင်ဘူး (ဂလို မိန်းမပီသတာ)။ အစားတလုပ်အတွက် အပင်ပမ်းခံတဲ့သူတွေကိုလည်း အံ့သြတယ်။ အံ့သြပေမယ့် ရေလည်ချီးကျူးတယ်။ လေးစားတယ်။ ဂုဏ်ပြုတယ်၊ မှတ်တမ်းတင်တယ်၊ ကျေးဇူး တင်တယ် (အဲလိုမပြောရင် ခေါ်မကျွေးတော့မှာစိုးလို့)။ သူများက တကူးတက ချက်ပြီးခေါ်ကျွေးရင်တော့ သိပ်ငြင်းလေ့မရှိပါဘူး။ အခင်မင် ပျက်မှာစိုးလို့ပါ။
ကျမဘဝမှာ ဖြစ်သလိုဆိုတဲ့ အချိန်တချိန်တော့ ကြုံဖူးတယ်။ အစ်ကိုတယောက် ဂန္ဓမာပန်းတွေ စိုက်တဲ့ ကာလပေါ့။ အဲတုန်းက သူ့ကိုသွားကူရင်း စိုက်ခင်းမှာပဲ သူတို့နဲ့တူတူ စားကြတာ။ ရှိတာလေးကို ကြုံတဲ့သူက ချက်ပေါ့လေ။ ကျမအစ်ကိုကြီးက ချက်တာများတယ်။ အဲဒီတုန်းက သူငယ်ချင်းတယောက်က ညဘက် ဖားတွေ ရိုက်လာရော။ အဲဒါကို အစ်ကိုကြီးက ချက်တာ။ ဆီမရှိလို့တဲ့ ... အပြေးချန်ပီယံ သူငယ်ချင်းတယောက် လိမ်းတဲ့ မုန်ညင်းဆီတွေ ထည့်ချက်ရော(သူ့စိတ်ကူးထဲ ဆီဆို ဘာဆီဖြစ်ဖြစ်ရပြီ ထင်ပုံရပါတယ်)။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ် စားမလဲ။ မုန်ညင်းဆီနံ့ နံစော်နေတဲ့ ဖားသားဟင်းကို ကြည့် ကြည့်ပြီး ဗိုက်တွေကဆာ ...၊ ထမင်းတွေချည်း လွေးရတော့တာ။ သြော် ... ငါ့ခမြာ ဖြစ်သလို စားနေရပါလား လို့ အဲဒီတုန်းကတော့ တွေးမိခဲ့ပါရဲ့ ....။
သူများတွေလုပ်သလို ဆက် tag ကြည့်ဦးမှ ... ဟိ။ ကိုင်းလာရော့လဟယ်။ ၁။ အာရဲဖေ (ရွာမှာအဲလိုပဲခေါ်တယ် စိတ်မရှိနဲ့) က ညီမလေး ဆုမွန် ...နဲ့ ၂။ ဂေါ်ဇီလာလိုလို ပုတ်သင်ညိုလိုလို အော်တတ်တဲ့ မောင်လေး အန်ဒီ တို့ရေ ... ရေးလိုက်စမ်းကွဲ့ ဖြစ်သလို။
Tuesday, September 30, 2008 | Labels: tag |3Comments
ဖတ်ပြီးသားလူတွေနဲ့ ခံစားချက်ချင်း ရှယ်ချင်ပါတယ်။ မဖတ်ရသေးသူတွေအတွက် တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပြီးညွှန်းပါမယ်။ အီးဘွခ်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် စာအုပ်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် တွေ့တဲ့နေရာမှာ ဖတ်ကြည့် စေချင်ပါတယ်။ စိတ်သဘောတွေတော့ တိုက်ဆိုင်ချင်မှ တိုက်ဆိုင်မယ်ပေါ့လေ။
အင်းစိန်ဂျီတီအိုင်ရဲ့ မှန်ဆောင်အပေါ်ဆုံးထပ် Drawing ခန်းမှာ ပုံဆွဲပြီး ပြန်ဆင်းလာတော့ ကျမကို ကိုအောင်မြင့်ဇော်က စာအုပ်တအုပ်လှမ်းပေးတယ်။ “ဒီစာအုပ်ဖတ်ကြည့် ကောင်းတယ်” ဆိုလို့ လှမ်းယူ ကြည့်လိုက်တော့ … ပန်းချီစံတိုး မျက်နှာဖုံးလေးနဲ့။ “တို့ဘဝ တို့ကမ္ဘာ” တဲ့။ ဘာသာပြန်တဲ့သူက မောင်ထွန်းသူ။ မူရင်းစာအုပ် နာမည်က Tortilla Flat ။ ရေးသူ John Steinbeck။
အမှာစာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ကတည်းက တခြား ဂျွန်စတိန်းဘတ်ရဲ့ ဝတ္ထုတွေနဲ့ မတူပါလား ဆိုတာ သွားတွေ့ပြီး ဝတ္ထုလေးကို စဖတ်မိပါတယ်။ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ ကျမကို ဆွဲခေါ်သွား လိုက်တာ လက်က မချချင်အောင်ပဲ။ အဲဒီညက ကျမရဲ့ အပြင်ဆောင် (ဂျီတီအိုင်ကျောင်းနား က အိမ်ခန်းလေး တခန်းကို ငှားနေတာ) လေးမှာ သဘောကောင်းတဲ့ အိမ်ပိုင်ရှင်ကို အားနာတာနဲ့ စာအုပ်ကလေးကို မပိတ်ချင်ပိတ်ချင် ပ်ိတ်ပြီး မီးပိတ် အိပ်လိုက်ရပေမယ့် စာအုပ်က ကျမကို ကောင်းကောင်းဆွဲဆောင်နေတော့တယ်။
မနက်ကျတော့ ကျောင်းသာသွားနေရ စိတ်ထဲမှာအဲဒီစာအုပ်ပဲ။ တော်တော်လေး သဘောကျနေပြီ။ ဒီစာအုပ်ရဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင် ဒင်နီရယ် သူ့သူငယ်ချင်း ပီလွန်ရယ် …. ပက်ဘလိုရယ် က ကျမကို ကောင်းကောင်း နှောင့်ယှက်နေပြီ။ စာသင်တော့လည်း စာက စိတ်ထဲမဝင်။
အရက်မူးပြီး သောင်းကျန်းလို့ ထောင်တလကျသွားတဲ့ ဒင်နီရဲ့ ထောင်ထဲမှာ အပျင်းဖြေနည်းက အပလိုင်း မက္ကင်းနစ် ပုစ္စာတွေကို သရော်လိုသရော်၊ မြန်မာစာ သံခိပ်တွေထဲ ဝင်နှောင့်လို နှောင့်၊ ပုံဆွဲတော့လည်း စကေးချမရ … လိုတဲ့ပုံကမထွက်နဲ့ …။ ကြည့်လေ ..
ဒင်နီသည် သရော်လှောင်ပြောင်သော နည်းတခုကိုတီထွင်၍ ကစားပြန်သည်။ သူသည် ကြမ်းပိုးကြီးကြီး တကောင်ကို ဖမ်းကာ နံရံတွင်ကပ်၍ ဖိသတ်လိုက်ပြီး ခဲတံတချောင်းဖြင့် ကြမ်းပိုးအသေကောင်ကိုပတ်၍ စက်ဝိုင်းတခု ဆွဲသည်။ ပြီးတော့ မြို့တော်ဝန် ကလောက် ဟု အမည်ပေးသည်။ ထို့နောက် ကြမ်းပိုးတ ကောင်ပြီးတကောင် ဖမ်းကာ မြို့တော် မြူနီစီပယ် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ၏ နာမည်များကို ပေးသည်။
မကြာမီမှာပင် နံရံတခုပေါ်၌ ဖိသတ်ပြီး ကပ်ထားသော ကြမ်းပိုးအသေကောင်များဖြင့် ပြည့်လာ သည်။ ကြမ်းပိုး တကောင်ချင်းစီကို မြို့ထဲမှ အရာရှိကြီးများနှင့် သူဌေးကြီးများ၏ အမည်ပေး သည်။ သူသည် ထိုကြမ်းပိုး အသေကောင်များတွင် နားရွက်များနှင့် အမြီးများ ဆွဲပေးသည်။ နှာခေါင်းကြီးများနှင့် နှုတ်ခမ်းမွှေးကြီးများ တပ်ပေးသည် တဲ့။
အဲဒီစကားလုံးတွေရဲ့ ဖမ်းစားမှုဒဏ်ကို ကျမဘယ်လိုမှ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ကျောင်းကို နေ့တဝက် ပြေးလိုက်ပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင်တော့ ဂျီတီအိုင်လိုကျောင်းမျိုးက အချိန်မပြေးသင့်ဘူးလေ။ ပထမနှစ် စာကလည်း ကြိုးစားနေတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ တချိန်ပျက်တာနဲ့ စာတွေ နားမလည်တော့တာ။
ဒါပေမယ့်လည်း မတတ်နိုင်ဘူး ကျမအရမ်းကို ဆက်သိချင်နေပြီ။ ဒါနဲ့ပဲ ကျမရဲ့ အခန်းကျဉ်း လေးထဲပြန်ရောက် .. စာအုပ်ကို အဆုံးထိ မပြီးမချင်း မထတမ်း ဖတ်လိုက်တော့တယ်။ စာအုပ် ပြီးသွားချိန်မှာ အရင်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တဲ့ ခံစားချက်ကတော့ တခြားဝါသနာတူ တယောက်ယောက်ကို အရမ်းပေးဖတ်ချင်မိတာပါပဲ။
မွန်ထရေးဆိုတဲ့ မြို့က တော်တီလာဖလက်ဆိုတဲ့ ရပ်ကွက်ကလေးထဲက လူရမ်းကား သူငယ် ချင်းတစုရဲ့ အစွမ်းကုန် ရမ်းကား၊ ဆိုးသွမ်း၊ မိုက်မဲ၊ လူလည်ကျမှုတွေကို စာရေးသူက ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် သရုပ် ဖော်ထားတာပါ။ မူရင်းစာအုပ်ကို မဖတ်ဖူးတဲ့အတွက် (ဖတ်လည်း ဖတ်နိုင်မယ်မထင်) မပြောနိုင်ပေမယ့် ဆရာမောင်ထွန်းသူရဲ့ ဘာသာပြန် လှပနိုင်နင်းမှုကြောင့် စကားလုံးတိုင်းက ကျမရင်ကိုငြိပြီး ဝါသနာတူ စာဖတ်သူချင်းကို လက်တို့ချင်စိတ် ဖြစ်မိတာပါ။
ဘာသာပြန်စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် အရေးအသားဘာညာ ကျမမှာပြောစရာသိပ်မရှိပါဘူး။ ကျမ ပြောချင်တာက ဒီစာအုပ်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။ ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ပြီးသွားချိန်မှာ စာအုပ်ထဲက ဇာတ် ကောင်တွေက ကျမသူငယ်ချင်း တွေ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ရင်းနှီးသွားတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဟိုး အနိမ့်ဆုံးဆိုတဲ့ လူတန်းစားတရပ်အကြောင်း စာရေးသူက မချန်မဝှက်ရေးသားထားရာမှာ လူတွေရဲ့ စိတ်တွေကိုလည်း ပေါ်လွင်အောင် ဖော်ပြထားလို့ ဒီစာအုပ်ထဲက ဒင်နီတို့ ပီလွန်တို့ ကောင်ကြီးဂျိုးတို့ဆိုတာ ကျမတို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲက လူတွေဖြစ်ဖြစ် သွားပါတယ်။
လူဆိုတာမျိုးက အကြောင်းပြချက်တွေ သိပ်များတယ်မဟုတ်လား။ တခုခုလုပ်တော့မယ် ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် တခုခုကို မလုပ်ချင်ဘူး ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းပြချက်ကလေးကတော့ ပေးလိုက်ရမှလေ။ ဥပမာ - ကျမပေါ့။ စာမရေး ချင်ဘူး ဆိုရင် ကိုယ့်ဘာသာ ပျင်းလို့ မရေးတာ ဖြစ်ပေမယ့် ဘယ်သူကမှလည်း မမေးရပါဘဲ ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်ကို တနေကုန် နှိပ်တာ မကောင်းဘူး။ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ ဒီလောက်အကြာကြီး မထိုင် သင့် ဘူးလို့ ကြားဖူးတယ်။ အ ပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် ရုပ်ရှင်လေးဘာလေးကြည့်မှ။ အဲလိုအကြောင်းပြပြီး အခွေထိုင်ကြည့် တာလေ။ (မမိုးချိုလိုပေါ့)။
ထမင်းချက်ဖို့ပျင်း၊ အပြင်ထွက်ဝယ်ဖို့ပျင်းတာနဲ့ပဲ ညနေစာဆိုတာ အများကြီးစားသင့်တာ မဟုတ်ဘူး လို့အကြောင်းပြပြီး ရှိတဲ့ ဂျု့စ်လေးတခုခုပဲသောက်ပြီး နေချင်နေ (ကြုံရင် တော့ ညနေစာတွေဘာတွေ မသိဘဲ တဖြဲနှစ်ဖြဲ အုပ်ချင်အုပ်ပြီးတော့)။ အဲလို အကြောင်း ပြချက်တွေက သူများကိုတင်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို လိုရာဆွဲလုပ်တဲ့သဘောကို ဒီစာအုပ်ထဲမှာ အစ အဆုံး တွေ့ရပါတယ်။
ဒင်နီ့မှာ အဖိုးအမွေပေးခဲ့တဲ့ အိမ် ၂ လုံးရှိပါတယ်။ တလုံးမှာ သူနေတယ် နောက်တလုံးကို သူ့ သူငယ်ချင်း ပီလွန်က တလ ၁၅ ဒေါ်လာနဲ့ငှားပါတယ်။ တကယ်တော့ ၁၀ ဒေါ်လာဆစ်လိုက် သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒင်နီက မလျှော့နိုင်လို့ ညည်းညည်းညူညူနဲ့ သဘောတူလိုက်တာပါ။ ဒီထက်မကတောင်းလည်း ပီလွန်က သဘောတူဖို့ အဆင်သင့်ဆိုပဲ။
ဒင်နီ့ဘက်က အိမ်လခရရန် မျှော်လင့်ချက် ထား မထားနှင့် ပီလွန့်ဘက်မှ နှစ်ဦးသဘောတူ သတ်မှတ်ထားသည့် အိမ်လခကို မှန်မှန်ပေးသွင်းရန် ရည်ရွယ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဟူသော အချက်ကို မူ ပြောရခက်သည်။ အကယ်၍ သူတို့ ၂ ယောက်သည် တယောက်ကအိမ်လခကို တောင်းပြီး တယောက်က အိမ်လခကို ပေးခဲ့သည်ရှိသော် ၂ ယောက်စ လုံး စိတ်ညစ်ကြရမည် ဖြစ်၏။
ဒါပေမယ့် ပီလွန်က ဒင်နီ့အိမ်လခကို ပေးချင်လွန်းလို့ နည်းအမျိုးမျိုးကြံပါတယ်။ သူ ငါးဗိုက်ခွဲ တဲ့ အလုပ်ကို သွား လုပ်တာ ၂ ဒေါ်လာရလာတယ်။ ဒီ ၂ ဒေါ်လာကို ဒင်နီ့ကိုသွားပေးရင် ဒင်နီ ပျော်သွားမယ်ဆိုတာ သိတယ်။ ဒါပေ မယ့် (အကြောင်းပြချက်ကလာပြီ) အဲလိုပေးလိုက်ရင် သူငယ်ချင်းချင်း မခင်မင်ရာရောက်မယ်၊ စော်ကားသလို ဖြစ်မယ်။ ၂ ဒေါ်လာအစား ဝိုင် ၂ ဂါလန် ဝယ်ပေးလိုက်ရင် သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့ တူတူလည်းသောက်လို့ရမယ် အခင် အမင်လည်း မပျက်တော့ဘူးလို့ စဉ်းစားမိတာနဲ့ ဝိုင် ၂ ဂါလန်ပဲ သွားဝယ်လိုက် တော့တယ်။ အဲဒီဝိုင်တွေ နဲ့အတူ ဒင်နီ့ အိမ်ဘက်သွားနေတဲ့ ပီလွန့်ရဲ့စိတ်တွေက အရမ်းကို ကြည်လင်နေတယ်။ သူငယ်ချင်းအတွက် တခုခု လုပ်ပေးနိုင်ပြီဆိုတဲ့ လူတယောက်ရဲ့ ဝိဥာဉ်ဟာ အရမ်းကို စင်ကြယ်လွန်းလို့ ခါတိုင်းဟောင်နေကျ ခွေးကတောင် သူ့ကို မဟောင်ဘူး ဆိုပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့လက်ထဲက ဝိုင်ပုလင်းတွေရဲ့ အလေးချိန်က နင့်လာတယ်။ လက်တွေ ညောင်း လာပြီ။
သူ့ခြေထောက်တွေက ဒင်နီ့အိမ်ဘက်ကို လျှောက်နေပေမယ့် သူ့စိတ်ကတော့ အတွေး တမျိုး ပေါက်လာတယ်။ ဒီဝိုင် ၂ ဂါလန်ကို သူတယောက်ထဲ သောက်ရရင် ကောင်းမှာပဲ ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးပေါ့။ အဲဒီမှာပဲ သူ့ခြေလှမ်းတွေကို ပြင်လိုက်တယ်။ တခြားဘက်ကို လှမ်းလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာပဲ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ပက်ဘလို ပေါ်လာတော့ တာ ပါပဲ။ သူတယောက်ထဲ သောက် မယ် ဆိုပြီး စိတ်ကူးထားတာဆိုပေမယ့် သူ့ဝိုင်ပုလင်းတွေကို ဖွက်ချိန်မရဘူး။ ဒါပေမယ့် ပက်ဘလို့ကို ခွဲတိုက်ဖို့တော့ စိတ်ကူးမရှိဘူး။ ဖြစ်ချင်တော့ ပက်ဘလိုက ငန်းတကောင် ခိုးလာတာတဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ …
ပီလွန်သည် တကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း တည်းဟူသော မကောင်းစိတ်မှ လွတ်မြောက် သွားသည်။ သူဝယ်လာ သည့်ဝိုင်ကို ဒင်နီထံ ယူမသွားသည်မှာ မှန်သော်လည်း သူသည် ပက်ဘလိုကို သူ့အိမ်သို့ လိုက်၍ ဝိုင်သောက်ရန် ဖိတ်သည် မဟုတ်ပါလား။
သူတို့ ၂ ယောက်ဝိုင်သောက်တာကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ “ကြွက်တွင်းကို ရေလောင်းကြစို့” ဆိုပြီး စဖွင့်လိုက်တာမှာ …
ပထမပုလင်း ကုန်သည့်အခါတွင်မူ မရေမရာနိုင်လွန်းလှသော ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုများ ဝင်လာသည်။ ဒုတိယ ပုလင်း၏ လည်ပင်းအောက်နားအထိ လျော့သွားသောအခါ စိတ်ပျက်ခြင်း အားလျော့ခြင်း တွေဝေငေးမော ခြင်းများ ဖြစ်လာသည်။ ထို့နောက် လက်နှစ်လုံးခန့် ထပ်၍ လျော့သွားသည့်အခါ အလွန်စိတ်ပါလက်ပါ သီချင်း ဆိုမိကြသည်။ နောက်ထပ် လက်တလုံး လျော့သွားသည့်အခါမူ လူကြိုက်များသည့် သီချင်းတိုင်းကို ဟိုတစ သည်တပိုင်း ဆိုမိကြ ပြန်သည်။ အရက် ၂ ဂါလန်၏ အဆင့်ဆင့်ဖြစ်စဉ်သည် ဤနေရာ အရောက်တွင် ရပ်သွား သည်။ ထို့နောက် ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဖြစ်ရပ်များသည် ဖရိုဖရဲနှင့် မသေချာ မရေရာ နိုင်လွန်းလှသည်။ စည်းကမ်းတကျနှင့် အဆင့်ဆင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အနေအထား မရှီတော့။ စည်းလွတ်ဝါးလွတ်နှင့် ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်သည့် အနေအထားသို့ ဆိုက်ရောက်သွားပြီ ဖြစ်သည်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ ပီလွန်က သူဒင်နီ့ဆီက ငှားထားတဲ့အိမ်ကို ပက်ဘလို့ကို ၁၅ ဒေါ်လာနဲ့ ဆက်ငှားဖို့ ဆွဲ ဆောင်ပါတယ်။ သူ့အိပ်ရာကလွဲလို့ ကျန်တဲ့တအိမ်လုံးမှာ နေနိုင်တယ် ပေါ့လေ။ သူဆွဲဆောင်ပုံကတော့ တ ကယ်လို့များ ပက်ဘလိုဆီကို လူတယောက်ယောက်က စာထည့် ချင်တယ်ဆိုရင် စာကိုအလွယ်တကူ ထည့်နိုင်ဖို့ နေရပ်လိပ်စာတခု ရသွားနိုင်တယ်တဲ့။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ပက်ဘလိုကလည်း အိမ်ကိုငှားဖို့သဘောတူတယ်။
ပီလွန်သည် အလွန်စိတ်လက် ပေါ့ပါးသွားဟန်ဖြင့် သက်ပြင်းချသည်။ ဒင်နီကို ပေးရမည့် အိမ် လခ ကြွေးများ သူ့ပုခုံးပေါ်၌ မည်မျှလောက်ထိ ပိလာမည်ကို သူလုံးဝသတိ မထားမိပေ။ သူ သေချာပေါက် နားလည်ထားသည့် အချက်တချက်တော့ ရှိသည်။ ယင်းမှာ အခြားမဟုတ် ပက်ဘလိုက ဘယ်တော့မှ အိမ်လခ ပေးလိမ့်မည် မဟုတ် ဟူသော အချက်ဖြစ်၏။ ထိုအချက် အတွက် သူစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း မဖြစ်ပေ။ အကယ်၍ ဒင်နီက အိမ်လခ တောင်းခဲ့ ပါမူ ပီလွန်အနေ ဖြင့် ပက်ဘလိုဆီက အိမ်လခ ရတဲ့အခါကျမှ ပေးမယ် ဟု ပြောနိုင်ပြီ မဟုတ်ပါလား။
ဒီလိုနဲ့ ပီလွန်ငှားနေတဲ့ ဒင်နီ့အိမ်မှာ လူတယောက်ပြီး တယောက် တိုးလာခဲ့ပါတယ်။ အားလုံး ထဲမှာ ဆရာကြီး ကတော့ ပီလွန်ပေါ့။ နောက်တယောက်က ဂျီးဆပ်မေရီယာကော်ရန်ကို။ သူလည်း ပီလွန့်အ်ိမ်ပေါ်ဒီလိုနည်းနဲ့ ရောက်လာခဲ့တယ်။ သူတို့သူငယ်ချင်းတွေက အိမ်ပိုင်ဖြစ် တဲ့ ဒင်နီ့ကိုတော့ အလွန်ဂရုစိုက်ကြတယ်။ ဒင်နီ တယောက် အိမ်နီးချင်း ဖြစ်တဲ့ မစ္စက် မော်ရေး ဆိုတဲ့ အဖွားကြီးတယောက်နဲ့ ငြိနေပြီဆိုတာ သိတဲ့အချိန်မှာ သူတို့သူငယ်ချင်းအတွက် စိတ်ပူ ကြတယ်။ သူတို့စိတ်ပူပုံက ခပ်ဆန်းဆန်းပဲ။ မစ္စက်မော်ရေးနဲ့ ဒင်နီကြိုက် နေပြီဆိုတော့ သူက ဒီအမျိုးသမီးကြီးအတွက် ချိုချဉ်ဘူး လက်ဆောင်ပေးချင်တယ်။ အဲဒီမှာ သူငယ်ချင်းတွေ ဘက်ကို လှည့်လာပြီ။ အိမ်လခနည်းနည်းလောက်ရရင် ကောင်းမယ် ပေါ့လေ။
အဲဒီမှာ သူတို့က ဒင်နီ့ကို စိတ်နည်းနည်းခုသွားတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ ဒီကောင်က သူငယ် ချင်းတွေကို မိန်းမ လောက်မှ အလေးမထားတဲ့ကောင်ပေါ့။ ဒီတခါတွေ့ရင် ဂျူးအိုကြီးလို့ ခေါ်မယ်ပေါ့။ နောက်တော့ သူတို့ပြောရင်း နည်းနည်း စကားကလွန်လာတယ်။ “ဒီအကောင် ငါတို့နဲ့ အပေါင်းအသင်း ဖြစ်လာတာ နှစ်ပေါင်း မနည်းတော့ဘူး၊ သူငတ်နေရင် ငါတို့က ကျွေးရတယ်၊ သူ့မှာဝတ်စရာ မရှိရင်လည်း ငါတို့ကပေးရတယ်” ပီလွန်က အဲလိုပြောတော့ ပက်ဘလိုက “ငါတို့က ပေးခဲ့ကျွေးခဲ့တာ ဘယ်တုန်းကလဲ” လို့ အူကြောင်ကြောင် ပြန်မေး တယ်။ အဲဒီမှာ ပီလွန် ပြန်ပြောတဲ့စကားက တော်တော့်ကို အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ် …
“ငါတို့လက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အခါမျိုးမှာ ပေးတာပေါ့ကွာ မင်းကလည်း။ ငါဆိုလိုတာက သူ့မှာ လည်းလိုနေတယ်။ ငါတို့မှာလည်း ရှိနေမယ်ဆိုရင် ပေးမယ်ဆိုတဲ့ သဘော ပြောတာ။ ဒီမှာ ပက်ဘလို ငါတို့က အဲဒီလို သူငယ်ချင်း မျိုးတွေပါကွာ။ အခုတော့ ဒီကောင်က ဟို မွတ်တား အိုမကြီးကို ချိုချဉ်တဘူး လက်ဆောင်ပေးချင်တာနဲ့ပဲ သူငယ် ချင်း အချင်းချင်း မျက်နှာ ပျက်အောင် လုပ်တယ်။ တို့အချင်းချင်းရဲ့ ခင်မင်မှုကို မြေကြီးပေါ်ချပြီး ခြေထောက်နဲ့ နင်းခြေ ပစ်တာပဲကွ” တဲ့။
အဲဒီမှာ အကြောင်းပြချက်ကလေးတခုကို ပက်ဘလို့ဆီက ကြားလိုက်ရတယ်။“ချိုချဉ်ဆိုတာ လည်း လူတွေနဲ့ တည့်တဲ့အစာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ” တဲ့။ အဲဒီအချိန်မှာ ချုံပုတ်ထဲက လက်တ ဖက် ထွက်လာတယ်။ လက်ရဲ့ဘေး မှာတော့ ဂါလန်ဝက်လောက် ကျန်သေးတဲ့ ဝိုင် …..။ အဲဒီလက်ပိုင်ရှင်က ဂျီးဆပ်မေရီယာပေါ့။
သူတို့က သူငယ်ချင်းကို တကယ့်ကိုစေတနာရှိတာ။ တကယ့်ကို သူငယ်ချင်းအတွက် လုပ်ပေး ချင်ကြတာ။ လုပ်လည်း လုပ်ပေးကြတာ။ တခုတော့ရှိတာပေါ့။ လုပ်ပေးရင်းနဲ့ လက်ထဲ တခုခု ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ လောဘစိတ်ကလေးတွေ ဝင်လာတတ်တယ်။ မပေးချင်တော့ဘူး။ အဲဒါလူပဲ မဟုတ်လား။ လောဘစိတ် ဝင် လာတာကို အကြောင်းပြချက် ကောင်းကောင်းနဲ့ ဖုန်းဖိ ကြတယ်။ အဲဒါလည်း လူပီသတာပဲ မဟုတ်လား။
ပီလွန်တို့နေတဲ့ အိမ်ကလေးက တရက် သူတို့အမူးလွန်နေတုန်း ထွန်းထားတဲ့ ဖရောင်းတိုင်က တဆင့် မီးလောင်သွားပါတော့တယ်။ ပြာပုံပဲကျန်တဲ့ အထိကိုလောင်သွားတာပါ။ အဲဒါကို ဒင်နီက မေးတယ်။ မီးဘယ်ကစလောင်တာလဲတဲ့ ပီလွန်က ဖြေတယ် “ငါတို့လည်း မသိဘူး တို့ကို မုန်းနေတဲ့ ရန်သူတွေ ရှိချင်ရှိမှာ။ ငါကတော့ ဒီကိစ္စမှာ ဘုရားသခင်တောင် ပါချင်ပါနေ မယ် ထင်တယ်” တဲ့။
နောက်တော့ သူတို့သူငယ်ချင်းတွေ အခင်အမင်မပျက် နေသွားနိုင်ကြတာပါပဲ။ အိမ်တလုံး မီးလောင်သွားတော့ လည်း သူတို့အားလုံး ဒင်နီ့အိမ်ပေါ်တက်နေလိုက်ကြတာပေါ့။ ဒင်နီက ခွင့်လွတ်ပြီး သူတို့ကိုလက်ခံတယ်ဆိုတော့ ပီလွန်တော်တော်ပျော်သွားတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ သူ့အနေနဲ့ ဒင်နီ့ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့် နေရတာဆိုတော့ ဧည့် သည် ဖြစ်သွားပြီ အိမ်ငှား မဟုတ်တော့ဘူး။ အိမ်လခအတွက် ပူစရာမလိုတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဂျီးဆပ်မေရီယာရဲ့ အဆင်ချင် ကင်းမဲ့တဲ့ ကတိကြောင့်တော့ ပီလွန် နည်းနည်း စိတ်ညစ်သွားတယ်။ “ဟောဒီ အိမ်ထဲမှာ ဒင်နီ အ တွက် အစားအစာ အမြဲတမ်း ရှိနေအောင် လုပ်ပေးရမယ့် တာဝန်ကို ငါတို့က ယူမှာပေါ့။ ငါတို့က ငါတို့ သူ ငယ်ချင်းကို ဘယ်တော့မှ မငတ်စေရဘူး” လို့ ဂျီးဆပ်မေရီယာ က ကျုံးဝါး လိုက်လို့ပါ။
ပီလွန်နှင့် ပက်ဘလိုက အလန့်တကြား မော့ကြည့်သည်။ သို့သော်လည်း ကတိစကားက ပြောပြီးနေပြီ။ အလွန်လှပပြီး အလွန် ရက်ရောသော စကားဖြစ်ပါ၏။ ဤစကားမျိုးကို မည်သူ ကမျှ ဖျက်ဆီးနိုင်မည် မဟုတ်။ သို့သော်လည်း ထိုစကားကို ပြောအပြီးတွင် ပြောသူ ဂျီးဆပ် မေရီယာကိုယ်တိုင် သူ့စကား၏ အတိုင်းအတာ ပမာဏကို ကောင်းစွာနားလည် နေသည်။ သူတို့ အဖို့ မျှော်လင့်စရာဆို၍ တခုတည်းသာ ရှိတော့၏။ တခြားမဟုတ်။ အခု ဂျီးဆပ် မေရီယာ ပြောလိုက်သည့် စကားကို ဒင်နီ မေ့သွားရန်ပင် ဖြစ်သည်။
ပီလွန်က တယောက်ထဲ ခက်ပြီလို့ တွေးမိပေမယ့် တကယ့်တကယ်မှာတော့ “ငါတို့ကတိ ပြုတယ် ဒင်နီ” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ သူတို့ ပင်လယ်ဓားပြကို ကူညီစောင့်ရှောက်ကြပါတော့တယ်။ လူကြီး ခန္တာကိုယ်နဲ့ ကလေး စိတ် ပင်လယ်ဓားပြ။ ခွေးတွေနဲ့ အတူနေပြီး ကြက်ခြံဟောင်း တခုထဲ မှာ အိပ်တဲ့ ပင်လယ်ဓားပြ။ တော ထဲ ထင်း ခွေပြီး ရောင်းစား၊ စားသောက်ဆိုင်တွေက ထမင်းကျန် ဟင်းကျန်တွေတောင်းစား၊ ရတဲ့ပိုက်ဆံ ၂၅ ဆင့် ကို နေ့ တိုင်း စုတဲ့ ပင်လယ်ဓားပြကို စ သတိထားမိတာက ဆရာကြီးပီလွန်ပါ။ စစခြင်းမှာတော့ သူက ပင်လယ် ဓားပြ စုနေတဲ့ ၂၅ ဆင့်ပေါင်းများစွာကို စိတ်ဝင်စားပြီး ချဉ်းကပ်ခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့် နောက်တော့ ပင်လယ်ဓားပြဟာ သေသွားတဲ့ သူ့ခွေးအတွက် ရည်စူးပြီး ရွှေဖရောင်းတိုင်စင်တစင်ကို ဘုရားကျောင်းကို လှူဖို့ ငွေစုနေတယ် ဆို တာ သိသွားတော့ အဲဒီငွေတွေကို သူတို့သူငယ်ချင်းတွေပါ ဝိုင်းပြီး စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့နဲ့အတူ ပင်လယ်ဓားပြလာနေတော့ ပင်လယ်ဓားပြရှာလာတဲ့ စားစရာတွေကိုပါ အဆင်သင့် စားနေ နိုင် တယ်။ ပင်လယ်ဓားပြကလည်း သူ့မှာ သိပ်ခင်တဲ့၊ အားကိုးရတဲ့ သူငယ်ချင်း တွေ ရှိနေပါလား ဆိုတာတွေးပြီး စိတ်ချမ်းသာရတယ်။ အဲဒီအခန်းလေးတွေကတော့ ဒင်နီတို့ တသိုက်ရဲ့ ဗရုတ်သုတ်ခတွေကြားက ကြည်နူး စရာတွေပေါ့။
သူတို့သူငယ်ချင်းတွေဟာ ဒင်နီ့ကိုတော့ အတော်ချစ်ကြတယ်။ ဒင်နီ့ကိုဆို အရမ်းကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ကြတယ်။ ဒင်နီ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ မိန်းမတယောက်နဲ့ ငြိနေတဲ့အချိန် သူတို့ ကယ်ထုတ်ကြတာများ တော်တော် လေးကို စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ သူတို့အောင်မြင် ကြတယ်။ ဒင်နီအနေနဲ့လည်း ကျေကျေ နပ်နပ် လက် ခံတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲက အရေးကြီးတဲ့ ဇာတ်ကောင်တကောင်ကတော့ တော်ရဲလီးပါ။ သူက တော်တီလာဖလက် ရပ်ကွက်ရဲ့ အရက် ဆိုင်ပိုင်ရှင်။ ဒင်နီတို့ သူငယ်ချင်းတသိုက်ဟာ တော်ရဲလီးနဲ့ ဘယ်လိုမှ ကင်းလို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတော်ရဲလီးက ဝိုင်ကို မတန်တဆဈေးယူတယ်လို့ ယူဆတဲ့ အတွက် လုံးဝလည်း မကျေနပ်ဘူး။ အဆင်သင့်ရင် သင့်သလို သူတို့လက်စားချေလေ့ရှိတယ်။
သူတို့ထဲမှာ ကောင်ကြီးဂျိုးဆိုတာ တယောက်ရှိသေးတယ်။ အဲဒီကောင်က ဒင်နီ့အိမ်ပေါ် တက်နေပြီး ဒင်နီ့ရဲ့ စောင်ကိုခိုးရောင်း၊ ပင်လယ်ဓားပြရဲ့ ပိုက်ဆံကိုခိုးတဲ့သူ။ သူ့ကို ပီလွန် ဆုံးမပုံကလည်း တော်တော်လေး သေသပ်တယ်။ ကမ်းစပ်မှာ ကောင်ကြီးဂျိုးက အသေ ကောင် တကောင်လို အိပ်ပျော်နေတုန်း သူ့ရဲ့ သက္က လပ်ဘောင်းဘီကို ချွတ်ပြီးတော်ရဲလီး မိန်းမဆီမှာ အရက်နဲ့ သွားလဲတာ။ (အဲဒီမှာလည်း အကြောင်းပြချက် ကလေးနဲ့ပါ။ ငါတို့က ဒီလို ဂျင်းဘောင်းဘီတွေ ဝတ်နေရတဲ့အချိန်မှာ ငါတို့သူငယ်ချင်းရဲ့ စောင်ကိုခိုးတဲ့ သူခိုးက ဒီလို အကောင်းစား ဘောင်းဘီဝတ်နေရတယ် ပေါ့လေ။ မတရားဘူးပေါ့)
ဒါပေမယ့် တော်ရဲလီးမိန်းမက ဘောင်းဘီနဲ့ မတန်တဆ လဲပေးလိုက်တဲ့ ဝိုင်က နည်းနေတဲ့ အခါကျတော့ ပီလွန် ဒီလိုစဉ်းစားပြန်တယ်။ ဒီတော်ရဲလီးဆိုတဲ့လူက အမြဲ သူတို့ကိုနှိမ်တယ်။ ခုတော့ သူ့သူငယ်ချင်းက ဘောင်းဘီ မပါဘဲနေနေရပြီ။ ဒါတော်ရဲလီးရဲ့ အပြစ်ဘဲ။ ဒီတော့ သူက နောက်ဖေးတန်းမှာလှမ်းထားတဲ့ ကောင်ကြီးဂျိုးရဲ့ ဘောင်းဘီကို အသာပြန်ရုတ်လာခဲ့ တယ်။ ပီလွန့်အနေနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းအတွက် ကောင်းမှုတခုလုပ် ပေးလိုက် ရသလို ခံစား လိုက်ရပြီ …။ ဘောင်းဘီယူလာပေးတဲ့ ပီလွန့်ကိုကောင်ကြီးဂျိုးကလည်း ကျေးဇူးတွေ တင်လို့။
သူတို့လူသိုက်က သနားတဲ့ စိတ်လည်းရှိကြတယ်။ ကလေးအဖေ တပ်ကြပ်ကလေး တယောက်ကို ကူညီ စောင့်ရှောက်ကြတယ်။ ပြီးတော့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အမျိုးသမီး တယောက်ကိုလည်း ကူညီစောင့်ရှောက် ပေး ကြတယ်။ အဲဒီအမျိုးသမီးက ကလေးတွေ အများ ကြီးနဲ့ ဒုက္ခရောက်နေတာပါ။ ပဲ ပုံမှန်စားရမှ အသက်ရှင်မယ့် အနေအထားရှိတဲ့ ကလေးတွေ အတွက် အဲဒီနှစ်က ပဲခင်းတွေ ပျက်လို့ ဒုက္ခရောက်ရတော့မှာ။ အဲဒါကို ကြားတဲ့ ဒင်နီတို့ လူသိုက်က ဖြစ်အောင်ကူညီပေးကြပါတယ်။
ထိုညက လူရိပ်လေးခုသည် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို ထမ်း၍ ကုန်လှောင်ရုံအနီးမှ ကုန်းကုန်း ကုန်းကုန်းနှင့် ထွက်ခွာသွားကြသည်။ ထိုအရိပ်မည်းမည်း လေးခုဆီမှ တဟောဟော တဟဲဟဲ မြည်နေသော အသက်ရှူသံ များကို ကြားနိုင်လောက်၏။ ထိုညက မနက်သုံးနာရီ ထိုးခန့်တွင် အိမ်နောက်ဖေး တံခါးဖွင့်သံ ကြားရသဖြင့် တီရီဆီနာ အိပ်ရာမှ လန့်နိုးလာသည်။ ဘယ်သူလဲ အော်မေးသည်။ အဖြေမရ။ သို့သော်လည်း အလွန်လေးပုံ ရသောပစ္စည်းထုပ် လေးထုပ်ချသံ ကို သူကြားလိုက်ရသည်။ ပစ္စည်းထုပ်ချလိုက်တိုင်း တအိမ်လုံး သိမ့်ကနည်း လှုပ်သွားသည် ကိုလည်း သူသတိထားမိသည်။ သူသည် ဖရောင်းတိုင်တတိုင်ကို ကပြာကရာထွန်းကာ ဖိနပ် ပင်မစီးနိုင်တော့ဘဲ အိမ်နောက်ဖေး မီးဖိုချောင်ဘက်သို့ ခပ်သုတ်သုတ် ပြေးသွားသည်။ မီးဖို ချောင်ထဲတွင် နံရံကိုမီ၍ ထောင်ထားသော ပေါင်တရာဝင် ပဲအိတ်လေးအိတ် …။
….. ထိုအချိန်တွင် တီရီဆီနာသည် မလွဲနိုင်မမှားနိုင်သည့် သူ့နည်းသူ့ဟန်ဖြင့် သူ့တွင် ကလေးတယောက် ကိုယ်ဝန်ရှိဦးတော့မည့် အခြေအနေကို အတိအကျ သိနေပြီးဖြစ်၏။ သူသည် ပဲတခွက်ကိုခပ်၍ အိုးထဲထည့်ရင်း က ထိုကလေး၏ အဖေသည် ဒင်နီ၏ သူငယ်ချင်း များထဲမှ ဘယ်သူဖြစ်နိုင်မည်ကို အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာ၍ စဉ်းစားတွေးတောလျှက် ရှိလေသည်။
နောက်ဆုံးအခန်းကတော့ အထွတ်အထိပ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်၊ ရူးကြောင်ကြောင်နီးပါးဖြစ်ပြီး အိမ်ကထွက်ပြေး၊ အိမ်ကပစ္စည်းတွေခိုးရောင်း၊ နောက်ဆုံး အိမ်ကိုပါ ဝိုင်နဲ့ လဲသောက်ဖို့ထိ ကြံစည်တဲ့ ဒင်နီ့ကို သူတို့သူငယ်ချင်းတွေ တော်တော်လေး သီးခံခွင့်လွှတ်ကြ ရတယ်။ နောက်တော့လည်း ဒင်နီက ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ပြီး အိမ်ကို ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်လို့ ထင်ရပေမယ့် ဒင်နီ့ခမျာ ပုံမှန်မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ ဘာကိုမှ စိတ် မဝင်စားနိုင်ဘဲ စိတ်ဓာတ်ကျ နေတဲ့ ဒင်နီ့ကို သူငယ်ချင်းတသိုက်က ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရအောင် ဆိုပြီး ပါတီပွဲတပွဲ ကျင်းပ ပေးဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ အဲဒီပါတီပွဲဟာ တော်တီလာဖလက်မပြောနဲ့ မွန်ထရေးမြို့တမြို့လုံး မှာတောင် အကြီးကျယ် အခန်းနားဆုံးလို့ ပြောလို့ရသတဲ့။
အဲဒီပါတီပွဲမှာ ဒင်နီတယောက် အသောင်းကျန်းလွန်ပြီး လောကကြီးကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ စစ်သားဟောင်း တဦးဖြစ် ခဲ့တဲ့အတွက် သူ့အသုဘကို စစ်အခန်းအနားနဲ့ ကျင်းပတာပါ။ အဲဒီအသုဘမှာတော့ သူ့ကိုသိပ် ချစ်တဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ မပါဝင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ သူတို့မှာ အဝတ်အစား ကောင်းကောင်း မရှိဘူးလေ။ သူတို့အတွက် သူတို့သူငယ်ချင်း ဂုဏ်ငယ်မှာကို မလိုလားကြဘူးပေါ့ (ဒါကတော့ အကြောင်းပြချက် မဟုတ်ပါဘူး)။ သူတို့အဝတ်တွေက မကောင်း ရုံတင်မဟုတ်ဘူး ပါတီပွဲညက သောင်းကျန်းထားလို့ စုတ်ပြဲနေတာ။ ဒင်နီ့အသုဘကို လိုက်မပို့မယ့် သူဆိုလို့ တယောက်မှ မရှိတဲ့အတွက် သူများအဝတ်ကို ငှားဝတ်ဖို့ဆိုတာလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး။ သူတို့ရပ်ကွက်သားတွေ အားလုံးက သူတို့နဲ့သိပ်မထူးတဲ့ လူတွေလေ ….။ ဒီလိုနဲ့ပဲ …။
ပီလွန်တို့လူစုသည် စုတ်ပြတ်ပေရေနေသော အဝတ်အစားများနှင့် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရှေ့ လမ်းမကြီး၏ တဘက် ပလက်ဖောင်းပေါ်မှ ရပ်ကာ ငေးမောနေကြသည်။ သူတို့ထက် ကံ ကောင်းသူများကတော့ အဝတ်အစား သစ်များ ဖြင့် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းထဲသို့ တသုတ်ပြီး တသုတ် ဝင်ရောက်သွားနေကြသည်။ ပီလွန်တို့သည် ဘုရားရှိခိုး ကျောင်း ထဲမှ ထွက်လာသော ဓမ္မတေးဂီတသံများ၊ ဓမ္မတေးသီဆိုသံများနှင့် တရားဟောသံများကို ကြားနေ ရသည်။
…အသုဘပို့သူများ သုသာန်တွင်းသို့မဝင်မီ ပီလွန်တို့ လူစုသည် ရှေ့မှ ဦးဆောင်သွားကာ ဒင်နီ၏ အလောင်းမြေချသည့် တွင်းနှင့် မလှမ်းမကမ်းရှိ မြက်ပင်ရှည်ကြီးများ ကြား၌ ဝင်ပုန်း နေကြသည်။ အသုဘ မြေချသည့် အခမ်းအနားသည် တိုတောင်းလွန်းလှချေသည်။ ခေါင်းကို မြေတွင်းထဲသို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ချသည်။ ရိုင်ဖယ် သေနတ်သံများ ကြားသောအခါ ကြောက် လန့်ခြင်း မဖြစ်မိ။ သူတို့ သေနတ်များ မောင်းတင်သံကို ကြားရ၏။ ပြီးတော့ ခရာမှုတ်သံ၊ ပြီးတော့ သေနတ်ဖောက်သံများ။ ပင်လယ်ဓားပြ၏ ခွေးများသည် ဦးခေါင်းများ ကိုမော့ကာ သံရှည်ဆွဲ၍ အူကြသည်။ ပင်လယ်ဓားပြသည် သူ့ခွေးများအတွက် ဂုဏ်ယူ၍ မဆုံးနိုင်အောင် ဖြစ်မိ လေသည်။
ဒင်နီ့အသုဘကို ကျမသူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ အသုဘလိုပဲ ဝမ်းနည်းစရာ ခံစားမိပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ကို ကျန်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ကြပြီးတဲ့ အခါမှာ ကျမတို့ သူငယ်ချင်းတွေ တော်တီလာဖလက် ပိုးတွေ ဝင်ကုန်တော့တာပါပဲ။ ကြိုက်လွန်းလို့ အပိုင်ဝယ်လိုက်တဲ့ စာအုပ်ကလေးကို ကျမမောင်အငယ်ကောင်က သူ့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်က သူငယ်ချင်းတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပါတယ်။ အဲဒီကောင်တွေလည်း တော်တီလာ ဖလက် ပိုးတွေ ကူးစက်ကုန်ပြန်တယ်။
ကျမပထမဆုံးဝယ်တဲ့ တော်တီလာဖလက်ကို ငြိမ်းချမ်းဆု (ခု နာမည်ကျော်မော်ဒန်ပန်းချီ ငြိမ်းချမ်းဆု) က ပြန် မပေးတော့ဘူး။ ဒုတိယမြောက်ဝယ်တဲ့ စာအုပ်ကိုတော့ လှိုင်ဘွား (ခု ဖလားဝါးနယူး ဂျာနယ်နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းမ် ဂျာနယ်တို့ရဲ့ ဒုအယ်ချုပ်) က ပြန်မပေးဘူး။ တောင်းတော့လည်း ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုလုပ်နေလေရဲ့။ ခု ကျမလက် ထဲ ရှိနေတာကတော့ တတိယ အကြိမ်မြောက်ဝယ်ဖြစ်တဲ့ စာအုပ်ကလေးပါ။ ဒီစာအုပ်ကလေးကတော့ ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ ကျမလက်ထဲ မြဲနေသေးတယ်။
ဒီစာအုပ်ကို အကြိမ်များစွာ ပြန်ဖတ်မိပြီး ပြန်ဖတ်မိတိုင်းမှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဒင်နီတို့ လူသိုက်နဲ့အတူ တော်တီလာဖလက် ရပ်ကွက်ထဲ ပြန်ရောက်သွားပြီး အပူအပင်ကင်းမဲ့၊ စိတ်ထင်တိုင်း ကျဲနိုင်တဲ့ အဆောင်နေ ကျောင်းသားဘဝလေးကို ပြန်သတိရမိပါတယ်။ ဒင်နီတို့ လူသိုက်ထဲက တယောက်မဟုတ် တယောက်နဲ့ ဆင်ဆင်တူတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ လွမ်းမိတယ်။ အဲဒီလို အချိန်တချိန်ရှိခဲ့ဖူးတဲ့အတွက်လည်း ကျေနပ်မိပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ကြုံတဲ့လူတိုင်း စာဖတ်တဲ့သူတိုင်းကို ဒီစာအုပ်ကို ညွှန်းတာပါ။ ဆရာ မောင်ထွန်းသူနဲ့ အင်တာ ဗျူးတခုလုပ်ဖို့ ဆုံခဲ့စဉ်က ဒီစာအုပ်ကလေး ဘာသာ ပြန်ဖြစ်ပုံကို ကျမ အလွတ်သဘောမေးမိပါသေးတယ်။ ဆရာကတော့ ဒီစာအုပ်ကလေးကို ကြိုက်လို့ ပြန်ဖြစ်တာလို့ပဲ ရိုးရိုးဖြေပါတယ်။ အထေ့အငေါ့ကလေးတွေ၊ ရွဲ့တဲ့တဲ့လေးတွေ၊ ပြုံးရတာ လေးတွေကို စာဖတ်သူကို ချပြချင်စိတ်နဲ့ ပြန်ခဲ့ပေမယ့် ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက် ဘာမှ မရှိတဲ့ ဒီစာအုပ်ကို စာဖတ်သူတွေ ကြိုက်ပါ့မလားလို့ သံသယ ဝင်ခဲ့ကြောင်း အမှာစာမှာ ရေးထား ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူထင်သလို မဟုတ်ခဲ့ဘဲ စာဖတ်သူက လက်ခံလို့ ကျေနပ်အားရပါတယ် တဲ့။
ဆရာက ကျမကို သူစိုးရိမ်တာ တခုပြောသေးတယ်။ လူငယ်တွေကို ဒီစာအုပ်ကလွှမ်းမိုးပြီး ဒီထဲကအတိုင်းတွေ လျှောက်လုပ်ကုန်မှာ သူစိုးရိမ်မိတယ်တဲ့။ သူ စိုးရိမ်မယ်ဆိုလည်း စိုးရိမ် လောက်ပါတယ်။ တကယ်ပဲ လွှမ်းမိုး နိုင်ခဲ့တာကိုး။ ကျမတို့သူငယ်ချင်းတစုဆို ကာလ အတော် ကြာကြာ ဒီထဲက စကားလုံးတွေကို စကားဝှက်တွေလို လုပ်ပြီး စကားပြောခဲ့ကြတာလေ။
တခုတော့ရှိပါတယ်။ ကျမတို့သူငယ်ချင်းတွေ တော်တီလာဖလက်ကို သဘောကျပြီး နှစ်သက် လွှမ်းမိုး ခံရပေမယ့် တသက်လုံး ဒင်နီတို့၊ ပီလွန်တို့လို နေသွားလို့မရပါဘူး။ နေလည်း မနေနိုင် ကြပါဘူး။ လောကကြီးကလည်း ခွင့် ပြုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော် …. အဲလိုလေး ခဏတဖြုတ် နေခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ပြန်တွေးတိုင်း ကြည်နူး မိတယ်။ ပျော်ရွှင်မိတယ်။ အဲဒီတုန်းက ရန်တွေ ဖြစ် ရုံးခန်းတွေရောက် ဆိုပေမယ့် ခု အမှတ်တရလေးတွေ ဖြစ်ရတယ်။
လူငယ်ဆိုတာ တခါလောက် မှားချင်မှားကြမှာဖြစ်ပေမယ့်၊ တသက်လုံးတော့ မှားမနေနိုင်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့ရုံ၊လွမ်းဆွတ်ရုံလေး ကျောင်းသားဘဝမှာ မှားခဲ့ကြတာ ပြဿနာမရှိလောက်ပါဘူး။ လူကြီးဖြစ်တဲ့ထိ မှားကောင်းတုန်း၊ အမှားကြီးကို ပျော်ပျော် ပါးပါး ဆုပ်ကိုင်ထားတုန်း ဆိုရင်တော့လည်း ….။
အင်းစိန် ဂျီတီအိုင် ကျောင်းတော်ကြီးမှ ၇ ရက်သားသမီး အဖွဲ့ကို လွမ်းဆွတ်ရင်း ရေးပါသည်။
Sunday, September 28, 2008 | Labels: စာအုပ်အညွန်း |3Comments
ဘယ်သူကမှလည်း ကိုယ့်ကို ရိုက်ပြီးမခိုင်းရဘဲ လုပ်ချင်နေတဲ့ အလုပ်က စာဖတ်တာရယ်၊ စာရေးတာရယ်ပါ။ ကျမငယ်ငယ်က စိတ်ကူးယဉ်ဖူးတယ် .. ကိုယ်ပိုင် မဂ္ဂဇင်းတအုပ်ထုတ်ချင်တယ်ပေါ့။ အဲဒီမှာ စာမူတွေကို တည်းဖြတ်၊ ကိုယ့်ဘာသာလည်း ရေးပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစိတ်ကူးက ဘယ်တော့မှဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ခဲ့မိတာ။ စိစစ်ရေးဆိုတာကြီးကလည်း ရှိသေးတာကိုး။ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ မဂ္ဂဇင်းလေးကို သူက ဓားတုံး ကြီးတွေနဲ့ ဟိုလှီးဒီဖြတ်လုပ်တာကို ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတော့ မဂ္ဂဇင်းလေးက စိတ်ကူးထဲမှာပဲ ပျောက်ပျောက် သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်ထူးဆန်းတာပဲ။ ခုတော့ ဘလော့ဆိုတာလေး ပေါ်လာခဲ့ပြီ။ ကိုယ့်စိစစ်ရေးနဲ့ ကိုယ် .. စိတ်ကြိုက်ဖန်တီး၊ ရေး၊ တင်။ အကန့်အသတ် ဘာမှမရှိ။ တချို့များ ဖန်တီးထားလိုက်တာလေးတွေ သွားရေကိုယိုကော။ ကျမက စာသာရေးတတ်တာ(ဒါလည်း အထင်ပါ) အဲဒါတွေကျ နားလည်တာမဟုတ်။ သူများဘလော့လှလှလေးတွေ လိုက်ကြည့် အားကျ၊ ကိုယ့်ဘလော့ပြန်ရောက် ပြောင်ရှင်းကြီး ... စိတ်ညစ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ သံသရာကလည်နေတာ။ တလောကတော့ ညီမလေး ဂျစ် ကောင်းမှုနဲ့ စီပုံးလေး ချိတ်ခွင့်ရလိုက်တော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရင်ထက်စာရင် နည်းနည်းတော့ ကြည့်ကောင်းသွားတာပေါ့လေ။ စီပုံးလေးမှာ လာလည် ထားတဲ့သူတွေတွေ့ရင် ပျော်တာပေါ့။ ဘယ်သူတွေများလာထားပါလိမ့်ဆိုပြီး တနေ့တနေ့ ဖွင့်ကြည့်ရတာ အမော။ အရုပ်အသစ်ရထားတဲ့ ကလေးလိုပဲ (မျောက်အုံးသီးရသလိုပဲ ဆိုလည်း မှန်ပါတယ်)။ ဘလော့လေး ရေးပြီဆို ကျမအဖေကို သိပ်သတိရတာ။ ပြီးတော့ ဦးလေး ဦးအောင်ပြည့်။ ဒီနှစ်ယောက်သာဆို သိပ်ပျော်မှာပဲ။ ကျမအဖေကလည်း သူဆွဲချင်တဲ့ ကာတွန်းတွေ ဆွဲချင်သလိုဆွဲလို့ရပြီဆိုပြီး ပျော်နေမှာ၊ သူဆွဲသမျှ ကာတွန်း တွေကို ကျမက တကွက်မှ မပယ်ဘဲ ထည့်ပေးမှာ ဆိုတော့လေ။ ဦးလေးကိုတော့ ကျမဘလော့မှာ အယ်ဒီတာ ချုပ်ခန့်ရမယ်။ အဲဒါဆို ကျမဘလော့ကလေးက သိပ်ကိုလှသွားမှာ။ ကျမစာလုံးပေါင်းမှားတဲ့အခါ တွေမှာတော့ ခေါင်းကို ဒေါင်ကနည်းမြည်အောင် ခေါက်မှာလေ။ နောက်ပြီး ကျမရေးတာတွေ အသုံးမကျရင် ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ် ဝေဖန်မှာ။ ကျမက သူ့ရဲ့ ချယ်ရီခေတ်တွေ ရာပြည့် ခေတ်တွေ ဝါနီပြာ ခေတ်တွေမှာ စာဖတ်သူ အဆင့်ပဲ ရှိသေးတာ။ သူ “ ဖတ်စရာ” ဂျာနယ်မှာ အယ်ဒီတာချုပ်လုပ်တော့မှ စာလေးနည်းနည်းပါးပါး ရေးစပြုချိန် ဆိုတော့ သူ့ဂျာနယ်မှာ အရမ်းကို ပါချင်တာလေ။ “အောင်ပြည့်” ရဲ့ အယ်ဒီတာစားပွဲကို ဖြတ်ပြီး စာမူ ပါချင်တာ ဖျတ်ဖျတ်လူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် စာမူကိုပို့လည်း မပို့ရဲဘူး ကြောက်တယ်။ ဦးလေးမို့လို့ကြောက်တာ မဟုတ်ဘူးနော်။ အောင်ပြည့်ကို ရှိန်တာပေါ့။ ကျမစာမူကို ပယ်လိုက်မှာလည်း ကြောက်တာ။ သူက မကြိုက်တဲ့စာမူဆို ဘယ်သူ့ကိုမှ အားနာတတ်တဲ့ အယ်ဒီတာမဟုတ်ဘူး ဆိုတော့ ကျမလို ပိစိကွေးပါမွှားကို စာရင်းတောင် ထည့်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျမရဲ့ ဝတ္ထုလေးတွေ မဂ္ဂဇင်း ပေါင်းစုံနီးပါးမှာ ပါဖူးနေပြီ။ အယ်ဒီတာ စားပွဲ တော်တော်များများ ကိုလည်း ဖြတ်ပြီးပြီ။ ပြီးတော့ ကျမ ဂျာနယ်လစ် အလုပ်လည်း လုပ်နေပြီ (သတင်းဂျာနယ် တစောင်မှာ အမှုဆောင် အယ်ဒီတာ) ဆိုပါတော့။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို စာမူပေးတော့ ကျမရင်တွေခုန်တာ မတရားပဲ။ ကျမက သူ့ကို ဦးမြင့်လို့ခေါ်တယ်။ “ဦးမြင့် သမီး စာမူတပုဒ် ပေးချင်လို့” ဆိုတော့ သူက“ပေးပေါ့။ ကြိုက်ရင် သုံးမှာပေါ့၊ မကြိုက်ရင်တော့ မသုံးဘူး” တဲ့။ ဒါနဲ့ ကျမလည်း ကြောက်ကြောက်နဲ့ ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်က ကျမအစ်ကိုကြီးက သူ့တိုက်မှာ ဓာတ်ပုံဆရာ လုပ်နေတာ။ စာမူပေးပြီး ကျမ ဖတ်စရာတိုက်ကို ရောက်ပေမယ့် စာမူကို သုံးမှာလား မသုံးဘူးလား မမေးရဲဘူးလေ။ တရက်ကျတော့ ကျမအစ်ကိုကြီးက ကျမကို “ဟဲ့ တူးတူး ... နင့်ကို ဦးမြင့်က ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ခိုင်းတယ်။ လာ ငါရိုက်ပေးမယ်” လို့ ပြောလာတော့ ကျမမှာ ပျော်လိုက်တာ ဆိုတာလေ။ ထခုန်မတက်ပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျမစာမူလေးကို သုံးပြီလို့ ပြောတာနဲ့ တူတူပဲလေ။ ဖတ်စရာမှာ စာမူပါရင် စာရေးသူရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ တွဲပြီး သုံးတာကိုး။ လေကတော်တော် ရှည်နေပြီနော်။ တကယ်က ဖတ်စရာ ဂျာနယ်မှာ ပါခဲ့တဲ့ အက်ဆေးလေး တင်ချင်ပါတယ်ဆို ပြီးတဲ့ဥစ္စာကို။ အက်ဆေးနာမည်က “လမ်းလျှောက်ခြင်း” တဲ့။ ကောင်းတယ် မကောင်းဘူးဆိုတာတော့ စာဖတ်သူက ဆုံးဖြတ်မှာပါ။ ကျမကတော့ အောင်ပြည့်ရဲ့ အယ်ဒီတာစားပွဲကို ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ အဲဒီအက်ဆေးလေးအတွက် ဒီနေ့ထိ ကျေနပ်နေတုန်းပဲ။ ခုတော့ အဲဒီအက်ဆေးလေးက “ဖွဲ့တည်ရာ” မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာတွေရဲ့ စားပွဲကို ထပ်ဖြတ်နေပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါဦးနော်။
အဲဒီနေ့က မမျှော်လင့်ဘဲ ကျမတို့ လမ်းလျှောက်ဖြစ်သွားသည်။ အိမ်က ထွက်စမှာတော့ သတိမပြုမိ..။ ကုန်းတက် ကုန်းဆင်း များသော ကျမတို့ မြို့ကလေးတွင် မသွားမဖြစ်သော နေရာတခုမို့သာ သွားရသည်။ လမ်းလျှောက်သွားရမှာမို့ စိတ်ပင် ပျက်ချင်ချင်။
သို့သော် ကုန်းတက် လမ်းကလေးအတိုင်း လျှောက်တက်သွားမိသည်နှင့် ကျမ၏ အတွေးတို့ ပြောင်းလဲသွားတော့သည်။ လမ်း၏ ဘယ်ဘက်မှာ ဆေးရုံ၊ ညာဘက်မှာ ကျောင်းကြီး။ ဆေးရုံနှင့် လမ်းကြားမှာ ဖုန်းဆိုးကွင်းပြင်လေးက ခြားထားသေးသည်။ ကျောင်းနှင့် လမ်းကြား မှာလည်း ကိုက် ၂၀ ခန့် ခြားထားသေး၏။
အငဲ၏ ကွင်းပြင်ကြီး သီချင်းကို မဆီမဆိုင် သတိရမိလိုက်သေးသည်။ ကွင်းပြင်ထဲ လမ်းလျှောက် နေသလို ခံစားမိသည်။ သားလေးက ရှေ့ကပြေး ကျမတို့ ၂ ယောက်က အနောက်က တဖြည်းဖြည်းချင်း လျှောက်လို့။ ကွင်းပြင်ကိုဖြတ်ပြီး ဆောင်းညနေလေက သုတ်ကနဲ ဖြူးသည်။ စိမ့်အေးသွားတော့ ရန်ကုန်ကလေ ပူပူကို ခေါင်းထဲမှမောင်းထုတ်ရ သေး၏။
တနင်္ဂနွေ ညနေခင်း ကျမရင်ထဲမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း ငြိမ်းချမ်းလို့နေသည်။ မနက်ဖြန် တနင်္လာ ဆိုတာလည်း မေ့ထားလိုက်ပြီ။ သားလေး၏ တီတာတာ စကားသံများကသာ ကျမနားမှာ ဝဲပျံလို့ နေသည်။
“မေမေ….. ဟိုမှာ ငှက်ကလေးတွေ…”
“ပန်းဝါဝါလေးတွေက ဘာလို့ မြေကြီးမှာ ကပ်နေတာလဲ”
“ဟိုးမှာ ….. ကောင်းကင်ကြီးက နီရဲနေတာပဲ”
ကျမတို့ ရေကန်ကြီးနား တဖြည်းဖြည်း ရောက်လာသည်။ လမ်း၏ ကုန်းထိပ်ကို ရောက်တော့ ရေကန်ကြီးက ဘွားကနဲ ပေါ်လာ၏။ သားက “ဟေး” ဟု အော်ရင်း ဆက်ပြေးသွားသည်။ လမ်းဘေးမှာ ကလေးများ ကစားနေကြသည်။ သား၏ သူငယ်ချင်း တယောက် နှစ်ယောက် အဲဒီထဲမှာ ပါသည်တဲ့။ လှမ်းနှုတ်ဆက်နေသည်။
“စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ… လမ်းမလျှောက်ရတာ ကြာပြီနော်…” လို့ ကျမက ပြောတော့ ခင်ပွန်းသည်က “စဉ်းစားပါဦး … တာမွေအဝိုင်းကနေ မိုးမခ ဟိုးဘက်လမ်းဆုံး အထိ သုံးဘလောက်စာလောက် အသွားအပြန် နေ့တိုင်း လျှောက်နေရတာ မေ့သွားပြီလား” ဟု ခနဲ့သည်။
ဟုတ်ပါရဲ့။ သူဌေးရပ်ကွက်ထဲ ဆင်းရဲသားတွေ အလုပ်ဆင်းနေရတာ မနိပ်ပါဘူးကွာ ဟု သူငယ်ချင်း တယောက်ပြောတာ သတိရမိသည်။ မိုးမခ လမ်းဆိုတာက ကားပိုင်တဲ့ သူဌေးတွေချည်း နေတာလေ။ ကျမတို့ ဂျာနယ် တိုက်သားတွေသာ အဲဒီ လမ်းထဲ လမ်း လျှောက် လျှောက်နေကြရတာ။
ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်နှင့် ကျမတို့ အလုပ်တိုက်က သုံးလေး ဘလောက်စာလောက် လျှောက်မှ ရောက်သည်။ အပြန်လည်း လမ်းလျှောက်ရလွန်းလို့ လမ်းလျှောက်နေရပါလား ဆိုတာတောင် မေ့နေတတ်သည်။
ခြေထောက်က သူ့အလိုလိုရွေ့နေတတ်၏။ မြို့ထဲထွက်ရသည့် နေ့များဆို ပိုဆိုးသည်။ အဲဒီနေ့မျိုးလျှောက်ရသည့် လမ်းကိုဆွဲဆန့် လိုက်လျှင် ခရီးက နည်းမှာမဟုတ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါ လမ်းလျှောက်တာမဟုတ်ဘဲ ခုကမှ တကယ်လမ်းလျှောက်တာ။
ကျမတို့ သွားရမည့်အိမ်က ရေကန်ကြီးနားမှာ။ အဲဒီရောက်တော့ တွေ့ရမည့်လူမရှိ။ အပြန်ကို ကန်ပေါင်ပေါ်က လျှောက်ပြီးပြန်ရန် ကျမခင်ပွန်းက ဆွယ်သည်။ သားလေးက ကန်ပေါင်ပေါ် ပြေးတက်သည်။ ကျမတို့ ကန်ပေါင်ပေါ်ရောက်တော့ ဆောင်းနေက ဝင်တော့မည်။ အလင်း ဖျော့ဖျော့ အအေးက ပိုပို။ ကျမတို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း လျှောက်လာကြ၏။ နေလက်ကျန်ကြောင့် ကန်ရေက လက်ဖြာနေသည်။
ကျမတို့ ကန်ပေါင်ပေါ်က ဆင်းလာတော့ နေဝင်ပြီ။ အမှောင်ထုကြီးစိုးလာပြီ။ မနက်ဖြန် တနင်္လာ။ အင်္ဂါဆို ဖောင်ပိတ်မှာ။ အလုပ်တွေများတော့ နယ်သတင်းတွေ ခုထိ မကိုင်ရသေး။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ စာရေးစားပွဲထိုင်ပြီး အလုပ်စမှ။ တနင်္လာကနေ စနေအထိ လမ်းတွေ လျှောက်ရဦးမည်။ ခြောက်ရက်စာ အလုပ်များနှင့် ခြောက်ရက်စာလမ်းတွေ။ တွေးတာတောင် မောသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခြောက်ရက်လုံးလုံး လျှောက်ရလွန်းလို့ မောနေတဲ့ အမောတွေကို ဖြေဖို့အတွက် နောက်အပတ် တနင်္ဂနွေကျရင် ခုလိုပဲ လမ်းလျှောက်ဦးမှပါလေ။
ဖတ်စရာ ဂျာနယ် - အမှတ် (၂)
Thursday, September 25, 2008 | Labels: အက်ဆေး |0Comments
လူတွေက ရင်ထဲမှာမွန်းကြပ်လာရင် တယောက်ယောက်ကို ရင်ဖွင့်ချင်တတ်ကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မျိုးမှာ ကိုယ့်စကားကို သေသေချာချာ နားထောင်ပေးတဲ့သူကတော့ တကယ့်သူရဲကောင်းပဲ။ အဲဒီလူကို သိပ်ခင်တာ ပေါ့။ ကိုယ့်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးရင် ပိုတောင် ကျေနပ်သေးရဲ့။ နားလည်းထောင်ပေးနိုင်ရမယ်၊ နောက် လျှို့ဝှက် ရမယ့်ကိစ္စဆို လျှို့ဝှက်ပေးရမယ် ...။ တကယ်တော့ အဲလိုလူရဖို့ဆိုတာ သိပ်မလွယ်ဘူးလေ။ လူဆိုတာမျိုးက ကိုယ်ကသာ ပြောချင်တာ သူများပြောတာ နားထောင်ဖို့ကျတော့ တော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်လား။ ကျမတို့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်လေး တဆိုင် ဖွင့်ခဲ့ဖူးပါတယ် ... အဲဒီတုန်းက စဉ်းစားမိတဲ့ အတွေးလေး တစကို အဲဒီတုန်းကပဲ ရေးပြီး ရတီမဂ္ဂဇင်းကို ပို့ခဲ့တာပါ။ “ဟစ်တိုင်” ဆိုတဲ့ ဒီဝတ္ထုလေးကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်ထုတ် ရတီ မဂ္ဂဇင်းမှာ ကာတွန်းစောမင်းဝေရဲ့ သရုပ်ဖော်ပုံလေးနဲ့ ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။
သူကလက်တွေ့မှယုံတာ။ ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်စေ့ စုံမှိတ်ပစ်ယုံလိုက်တဲ့ထဲမှာ သူမပါဘူး။ ခုတလော သူ့စိတ်ထဲ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တဆိုင် ဖွင့်ချင်နေတယ်။ သူ့မိန်းမကတော့ သူ့ကို မျက်စောင်းခဲတယ်။ အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်မနေချင်ရကောင်းလား ဆိုပြီး…။ သူ့မိန်းမ ကတော့ သူ့ကို ယုံကြည်ပြီး အရင်းအနှီး ထောင်ပေးမယ့်ပုံ မရှိဘူး။ ခုတလောမှာ သူဖတ်ဖြစ် တဲ့ ဝတ္ထုကလည်း “ပီတာဇော်မြင့် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်၍ ရူးသွားခြင်း”တဲ့။ ပြီးတော့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင် သူငယ်ချင်းတယောက်ကလည်း ညည်းလိုက်တာ ခြူသံကိုပါလို့။ အဲဒါကြောင့်ကို သူကလည်းဖွင့်ကြည့်ချင်တာ။ သူက လက်တွေ့သမားလို့ ပြောပါပကောလား။
ဖြစ်ချင်တော့ ကံကြမ္မာကပဲ သူ့ဘက်မှာရှိနေသလား ဘာလားတော့မသိ။ သူ့အဒေါ်တယောက် ရုတ်တရက်ကြီး ကွယ်လွန်သွားတယ်။ သားထောက်သမီးခံ မရှိလို့တဲ့ သူတို့ မောင်နှမတွေ အမွေရလိုက်တယ်။ ကဲ ဘယ်လောက်တိုက်ဆိုင်လဲ။ သူကလည်း လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ဖွင့်ချင်နေတဲ့ အချိန် အမွေကလည်း ရ။ ဘာပြောကောင်းမလဲ ဘယ်သူတားတား မရဘူး။ သူ့စိတ်ကူး အကောင်အထည်ဖော်ပြီ။ တကယ်တော့ သူက လက်ဘက်ရည်သာ ကြိုက်တတ် တာ။ အကျရည် ဘယ်လိုနှပ်ရလည်း ဆိုတာတောင် သိတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါလွယ်ပါတယ်။ တတ်တဲ့ သူတွေဆီက နည်းနာယူလိုက်တာပေါ့။ ကဲ ဆိုင်ဖွင့်ပြီ။ သူ့ဆိုင်နာမည်ကာ ‘M – Jazz’ တဲ့။ ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ လာမမေးနဲ့။ သူလည်း မသိဘူး။
“ငါလေ အမ်းလို့ရရင် ပြန်အမ်းလိုက်ချင်တယ် ဖိုးသိုက်ရယ်။ မပြောလိုက်ချင်ဘူး။ ငါဆိုတဲ့ ငါက သူ့ကိုချစ်လွန်းလို့ ဟိုကောင်မတွေနဲ့အပြိုင် သူ့ကိုရအောင်ယူခဲ့တာပါ။ နင်လည်း အသိပဲ”
“နေစမ်းပါဦး။ အခု ဟိုကောင်က ဘာဖြစ်နေလို့လဲ”
သူလက်ဘက်ရည်ဖျော်တဲ့ အဖျော်ခုံနားထိ လိုက်လာပြီး တတွတ်တွတ်ပြောနေတဲ့ မိနွယ်ကို လှည့်မကြည့်ဘဲ ပြန်မေးလိုက်တယ်။ မိနွယ်ဆိုတာ သူ့သူငယ်ချင်း အောင်ကြီးရဲ့ မိန်းမ။ ခုတော့ သူနဲ့လည်း သူငယ်ချင်းပါပဲ။
“ဘာဖြစ်ရမလဲ။ ဘာအလုပ်မှမလုပ်ဘူး။ မလုပ်တာ ငါမပြောဘူး။ ငါရှာကျွေးနိုင်တယ်။ အေး … ဘာမှမလုပ်ရင် အေးအေး ဆေးဆေး ထိုင်စားပေါ့။ ခုမဟုတ်ဘူး။ ပြဿနာတွေ တခုပြီး တခု ရှာရှာလာတယ်”
“ကဲ ကဲ လာ။ ခုံမှာ ထိုင်ရင်းပြော”
ဖျော်တဲ့နေရာမှာ လက်ထောက် အဖျော်ဆရာနဲ့ လွှဲထားခဲ့ပြီး လေးနွယ်ဖို့ လက်ဘက်ရည် တခွက် လာချပေးရင်း ခုံမှာ သူပါဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။
“နင့်သူငယ်ချင်း စည်းကမ်း မရှိပုံများ မပြောချင်ဘူးသိလား။ အောက်ထပ်မှာ ငါ့အစ်မတွေ နေတာ နင်သိပါတယ်။ အဲဒီအောက်ထပ်က ရေခဲသေတ္တာထဲက ရေပုလင်းတွေကို ယူသောက် တယ်။ ပြီးတော့ ပြန်မဖြည့်ပေးထားဘူး။ အောက်ကလူတွေ ပွစိပွစိလုပ်တာကို ငါကခံရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ။ သူများက ကိုယ့်ယောက်ျားကို မကောင်းပြောတာ ဘယ်သူက ခံချင်ပါ့မလဲ။ ဒါပေမယ့် သူက လွန်တာဆိုတော့ ငါဘာသွားပြောမလဲ ကဲ”
မိနွယ်ကိုကြည့်ရင်း သူရယ်ချင်နေမိတယ်။ မိနွယ်အောင်ကြီးကို ဘယ်လောက်ချစ်လဲ သူအသိ။ အောင်ကြီး ဆိုတဲ့ကောင်က ရုပ်ကဖြောင့်တော့ ကောင်မလေးတွေ ဝိုင်းနေတာ။ အဲဒီကြားက မိနွယ်က ရအောင်ယူခဲ့တာ။
“နောက်တော့ကော” …. သူစကားထောက်ပေးလိုက်တယ်။
“ပြောမယ်။ ပြောမယ်။ မပြီးသေးဘူး။ သူကလေ ငါ့မောင်သူ့ယောက်ဖကို ကြည့်မရဘူးတဲ့။ သူ့အင်္ကျီတွေ ယူမဝတ်စေနဲ့တဲ့။ အဲဒါဆို သူက ကင်းအောင်နေပေါ့။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ ခုတော့ သူက ဟိုကောင့်အင်္ကျီတွေ ယူဝတ်တယ်။ အဲဒီတော့ ဟိုကောင်ကလည်း သူအင်္ကျီတွေ ယူဝတ်တာပေါ့။ အဲဒါကျ မကြိုက်ဘူးတဲ့။ စဉ်းစားကြည့်စမ်း။ ငါ ဘာလုပ်ရမလဲ။ ခုဆို သမီးကအစ သူ့ကို အတုခိုးတတ်နေပြီ။ သမီးရေ မျက်နှာသစ်ရအောင် ဆိုရင် ဖေဖေလည်း သစ်ဘူးတဲ့။ တီဗီကြည့်တာ ခုံမှာထိုင်ကြည့် ဆိုရင် ဖေဖေဆို အိပ်ပြီးကြည့်တာ တဲ့။ သူလည်း အိပ်ပြီးကြည့်မယ်တဲ့။ ကဲ ငါ ကလေးကိုတောင် မသွန်သင်တတ်တော့ဘူး”
ဟုတ်တော့ ဟုတ်တယ်။ အောင်ကြီး စည်းကမ်းမရှိတာ ဖြစ်သလို နေတာ သူတို့လည်း အသိ။ မိနွယ်ပြောတာတွေ အမှန်တွေချည်း။ သူကတော့ရယ်ပဲ ရယ်နေလိုက်တယ်။ ဒါတွေ မိနွယ် မသိခဲ့တာမှ မဟုတ်တာဘဲ။ ပြောနေရာကနေ မိနွယ်မျက်နှာ အုံ့မှိုင်းလာတယ်။ ပြီးတော့ သူ့နား တိုးတိုး ကပ်ပြောတယ်။
“နင့်သူငယ်ချင်းက ဒါတွေတင်မကဘူး ဖိုးသိုက်ရေ” ဆိုပြီး ငိုပါလေရော။
“ဟဲ့ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ။ ဆိုစမ်းပါဦး”
“သူက အငယ်အနှောင်းတွေ ဘာတွေ ထားချင်နေပြီ။ သိလား”
“ဟုတ်ရဲ့လားဟာ။ ဒီကောင် ဒါမျိုး မကြားမိပါဘူး”
“ဟုတ်သမှ သိပ်ဟုတ်။ ခုဆို တခါတလေ ည ပြန်မအိပ်ဘူး။ ငါ့မှာလေ ရင်ထဲမှာ မြိုသိပ်ထားရ လွန်းလို့ မွန်းကျပ်နေတာ ကြာပါပြီ။ ဘယ်သူ့ဆီသွားရင်ဖွင့်ရမှန်းလည်း မသိဘူး။ အားလုံးက ကိုယ့်အလုပ်နဲု့ကိုယ် အားကြတာ မဟုတ်ဘူးဟ။ နောက်မှ နင့်ကို သွားသတရတယ်။ နင်က အထိုင်ကဆိုတော့ ဖမ်းရခက်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး နင့်ဆီထွက်လာတာ”
သူ့ယောက်ျား ရှုပ်တဲ့အကြောင်းတွေ၊ သူများပစ္စည်းတွေငှားပြီး ပြန်မပေးလို့ ပိုင်ရှင်ကလိုက် လာမှ မျက်နှာပူရတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ ပြောပြီး နောက်ဆုံး သူ စပြောခဲ့တဲ့ ပြန်အမ်းချင် တယ်ဆိုတာနဲ့ အဆုံးသတ်သွားလေရဲ့။ သူ့မှာတော့ ရင်တွေ မောပြီး ကျန်ခဲ့လို့။
နောက်တော့လည်း အောင်ကြီးရယ်၊ မိနွယ်ရယ်၊ သမီးရယ် မိသားစုသုံးယောက် စက်ဘီး တစီးနဲ့ သူ့ဆီရောက်လာပါတယ်။ မိနွယ်ကလည်း ပြောခဲ့တာ သူမဟုတ်သလို။ ဟိုကောင် အောင်ကြီးကလည်း ဘာမှ မလုပ်ခဲ့သလို မောင်ရေ၊ နွယ်ရေနဲ့။ အင်း … သူတောင် မျက်စိလည်သွားတယ်။
“ကိုသိုက်ပဲစဉ်းစားကြည့်ဗျာ။ ကျနော် သေချာပြောထားရက်နဲ့ အဲဒီကောင်တွေ လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်တယ်။ ခုတော့ ခံရပြီလေ။ ခံရတာ နည်းတောင်နည်းသေးတယ်။ သူတို့ခံရတာ အကြောင်း မဟုတ်ဘူး။ အခု ကျနော်တို့ပါ ကြားညပ်တာပေါ့။ ဟိုက မရဘူးဗျ။ သူနဲ့ယှဉ်လိုက်တာနဲ့ ဖောက်တော့တာ”
ခုထိတော့ ကိုဇော်ဝင်း ပြောနေတာတွေ သူ တလုံးမှ နားမလည်သေးပါ။ ယှဉ်တာတွေကော၊ ဖောက်တာတွေကော၊ ကြားညပ်တာကော ဘာတွေမှန်းကို မသိ။
“နေပါဦး။ ကိုဇော်ဝင်းရဲ့။ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကိုယှဉ်လို့ ဘယ်သူက ဖောက်တာလဲ”
“ဟာဗျာ ကိုသိုက်ကလည်း။ ဟိုကောင် ဝင်းမင်းတို့ အုပ်စုလေ။ ဆရာပေးတာကို အသာမယူဘဲ တခြားလူတွေနဲ့ သွားယှဉ်တာ ခံရတာပေါ့ဗျာ”
“ဟောဗျာ။ ကိုသိုက်ကလည်း နောက်နေပြန်ပါပြီ။ ဆရာကိုမြင့်စိုးလေ”
“သြော် …. ဟိုဟာ ပေးတဲ့ ဘိုးတော်လား”
“ဒီဆိုင်မှာ အမြဲလာထိုင်တဲ့ဆရာလေ။ သူက ကျုပ်တို့ကိုပေးတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒါကို ဟိုကောင် ဝင်းမင်းတို့က ဆရာ့ဂဏန်းနဲ့ တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ဂဏန်းကို ချိန်ပြီးထိုးတယ်။ အဲဒါကို ဆရာက သိတယ်ဗျ။ သိတော့ဖောက်ရော။ အမှန် မပေးတော့ဘူး။ ကြားက ခံရတာက ကျနော်တို့ဗျ။ စဉ်းစားကြည့်လေ။ ကျနော်တို့က ဘယ်ဘိုးတော်နောက်မှ မလိုက်ဘူး။ သူ့နောက်ပဲ လိုက်တာ။ ဒါနဲ့ ကိုသိုက်။ ဒီလ ၂ တလုံးကောင်းတယ် သိလား။ ခင်ဗျားမို့လို့ ကျုပ်ပြောတာ။ ဟိုကောင်တွေတော့ တော်ပြီ။ ဒီတခါလာလို့ကတော့ နားရင်းရိုက်လွှတ်မှာ”
ပြောပြောဆိုဆို ပိုက်ဆံရှင်းပြီး ထွက်သွားတဲ့ ကိုဇော်ဝင်း သူဘာလုပ်လွှတ်မယ်၊ ညာလုပ်လွှတ် မယ်ဆိုတဲ့ သူတွေနဲ့ တဟီးဟီး တဟားဟား။ ဟို ဆရာဆိုတဲ့ သူ ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ သူတို့ဝိုင်းက အားလုံ ငြိမ်လို့။ အပ်ကျသံတောင် ကြားလောက်ရဲ့။ ဟိုဆရာ့ပါးစပ်က ထွက်လာမယ့် စကားလုံးတိုင်းကို ဖမ်းယူဖို့ မုဆိုးမျက်လုံးတွေနဲ့ ဟိုဆရာ့ပါးစပ်ကိုထိုင်ငေးနေ ကြတာ။ တနာရီကြာကြာ၊ ၂ နာရီကြာကြာ ထိုင်လည်း ထိုင်နိုင်တဲ့သူတွေ။
“သူက ကလေးလိုပဲငသိုက်ရေ။ ဘာမှလည်း သိတာမဟုတ်ဘူး။ သိအောင်လည်း မကြိုးစားဘူး။ ငါ့မှာသာ ဒုက္ခတွေ တပြုံတမနဲ့ ပြောရင် ယုံမှာမဟုတ်ဘူး”
သူ့အစ်ကို ဝမ်းကွဲ ကိုစိုးရဲ့ မိန်းမ မမဝင်းက အဆီပြန်နေတဲ့ မျက်နှာကို မွှေးပွ လက်ကိုင်ပုဝါနဲ့ ပွတ်သုတ်ရင်း သူ့ကိုပြောလာတယ်။
“ကိုစိုး ဘာဖြစ်လို့လဲ မမဝင်း”
“သူက ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ဖြစ်တာက ငါ ငသိုက်ရဲ့။ နင့်အစ်ကိုကလေ။ မိန်းမဘာဖြစ်နေလဲ။ ဘယ်လိုတွေ ဒုက္ခတွေ့နေလဲဆိုတာ လုံးလုံးမသိဘူး။ သူသိတာ တီဗီဂိမ်းကစားမယ်။ ပြီးရင် သူ့ရဲ့ ဒုန်းဒုန်းဒိုင်းဒိုင်း အခွေတွေ နားထောင်မယ် ဒါပဲ။ ငါ့မှာ ကြွေးတွေ ပတ်ပတ်လည် ဝိုင်းနေ တယ် ငသိုက်ရဲ့။ ဒီကြားထဲမှာ သူက တီဗီလိုချင်တယ်တဲ့ ပူဆာတယ်”
“ပြောရင်လည်း သူပဲစိတ်ဆင်းရဲရုံရှိမှာလေ။ သူက ဖြေရှင်းတတ်တဲ့သူမှ မဟုတ်ဘဲ။ ငါ့ဟာ ငါပဲ ဖြေရှင်းရမယ့်တူတူ လေကုန်ခံ ပြောမနေတော့ဘူး။ သူက ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ။ အိမ်မှာ တီဗီ ဝယ်မပေးရင် ရတယ်တဲ့။ နင့်ဆီမှာတီဗီရှိတယ်ဆိုတော့ နင့်ကိုပဲ ဂိမ်းစက်ဝယ်ခိုင်းပြီး နင့်ဆိုင်မှာ တနေကုန်လာဆော့မယ်တဲ့။ ငါ့ကိုခြိမ်းခြောက်တယ် နင့်အစ်ကိုက”
“တဖြည်းဖြည်း သဘောပေါက်အောင်ပြောပေါ့ မမဝင်းရယ်”
“အောင်မယ်လေး မထင်ပေါင်။ ငါ့မှာ ယောက်ျားလည်း တိုင်ပင်လို့မရ။ အိမ်က အဖေအမေကို ပြောပြရင်လည်း ကိုယ်ကြိုက်လို့ ယူထားတဲ့ယောက်ျား သိက္ခာကျဦးမယ်။ အဲဒီတော့ ရင်ဖွင့်ချင် လာရင် နင့်ဆီပဲ လာလိုက်တယ်။ နင်က အထိုင်ကဆိုတော့ အဆင်ပြေတယ်လေ။ တခြား လူတွေဆို စကားလေး ပြောရဖို့ အရေး လိုက်ဖမ်းရဦးမယ်။ ကဲ ကဲ သွားမယ်ဟေ့”
လက်ပွေ့အိတ် အမည်းကြီး ကောက်ပွေ့ပြီး လှုပ်လှုပ် လှုပ်လှုပ်နဲ့ ထွက်သွားတဲ့ မမဝင်းကို သူ မသက်မသာနဲ့ ကြည့်မိတယ်။ သူ့အချစ်လွန် ရောဂါကလည်း မသေးပါလား။
“တော်ပြီ ဖိုးသိုက်ရေ။ တော်ပြီကွာ။ ငါ အဲဒီစေ့စပ်ပွဲကို ဖျက်လိုက်တော့မယ်”
“ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ ကိုနိုင်ရာ။ အရက်တွေလည်း မူးလို့။ သောက်ဖူးတာလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဗျာ”
“ငါ့ကို ဘလက်ကော်ဖီ တခွက်ဖျော်ပေးစမ်းကွာ။ ပြောမယ်။ ပြောမယ်။ ပြောချင်လွန်းလို့ကို မင်းဆီလာတာ”
သူကိုယ်တိုင် ဘလက်ကော်ဖီ ဖျော်ပြီး ယူလာတော့ ကိုနိုင် ဇက်ကျိုးနေပြီ။
“ကိုနိုင်၊ ကိုနိုင် ထ ထ။ ဒီမှာ ကော်ဖီရပြီ”
ခေါင်းပြန်ထောင်လာပြီး ကော်ဖီကို တကျိုက်ကျိုက်တယ်။ ကိုနိုင်က လူပျိုကြီး။ အသက်ကြီးမှ ငယ်သူငယ်ချင်း မသက်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ပြီး လက်ထပ်ကြမှာ။ သူတို့နှစ်ယောက်က လွန်လိုက်ဖက် တဲ့ စုံတွဲ။ မသက်ကလည်း သူ့အပေါ်မှာ အရမ်းနားလည်မှုရှိတဲ့ မိန်းမ။ ပြဿနာမရှိနိုင်ဘူးလို့ ထင်ထားတာ အခု ဘာပြဿနာ တတ်လာပြန်ပြီလဲမသိ။
ခဏနေတော့ ကိုနိုင် ခေါင်းပြန်ထောင်လာပြီး ကော်ဖီကို တကျိုက်ကျိုက်တယ်။
“မသက်နဲ့ ဘာဖြစ်လာပြန်တာလဲ။ ကိုနိုင်ကလည်းဗျာ။ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ ဒီလောက်တောင် နီးနေပြီ ဥစ္စာ”
“မင်း မသက်နဲ့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးဟေ့။ ဖြစ်တာက သူ့ညီမနဲ့။ မင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်း။ သူ့ အစ်မနဲ့ ငါ့ကို သဘောမတူဘူးတဲ့။ ငါက ဘာမို့လို့လဲ။ ငါတို့က ကလေးတွေလည်း မဟုတ်ကြတော့ဘူး။ ထားပါတော့။ သဘောမတူ ဘာအရေးလဲ။ သူ့အမေနဲ့ အဖေ သဘောတူ ပြီးပြီ။ ခုဟာက ငါတို့ကို လိုက်နှောင့်ယှက်သလိုကြီး ဖြစ်နေတယ်။ သူ့အစ်မ အိမ်မှာ မနေချင်အောင် ဆောင့်လား အောင့်လားတွေ လုပ်တယ်ကွာ”
“ဒါလေးများ ကိုကြီးရာ ဂရုစိုက်လို့”
“ဒါလေးမများနဲ့ဟေ့ကောင်။ ခုဟာက ငါ့ပါ ထိလာပြီကွ။ ဒီညနေ ငါက မိသက်ကို လိုက်ပို့တယ်။ အိမ်ဝမှာ သူနဲ့ စကားရပ်ပြောနေတာပေါ့ကွာ။ ဒါကလည်း သူ့အိမ်ပေါ် မတက်ချင်လို့။ တက်ရင် ငါ့ကို ပြဿနာ လုပ်မှာစိုးလို့ မတက်တာ။ အဲဒါကို အိမ်ပေါ်ကနေ ငိုကြီးချက်မနဲ့ကွာ။ သူ့ကိုငါတို့က နှိပ်စက်နေပါတယ်ဆိုပြီး ရင်ဗတ်တွေ ထု ထုငိုတာ တရပ်ကွက်လုံး ကြားမယ်။ ငါ့မှာ ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ အိမ်တွေက ထွက်ကြည့် တော့ ရှက်လိုက်တာကွာ။ အဲဒါနဲ့ ငါလည်း မိသက်ကို ဘာမှ မပြောဘဲ တချိုးထဲ လစ်ပြေး ခဲ့ရတာ။ တော်ပြီကွာ စေ့စပ်ပွဲကိုလည်း ငါမသွားတော့ဘူး။ စေ့စပ်ပွဲမှာ သူ အဲလိုတွေ ထလုပ် နေရင် ငါ့ဘက်က လူကြီးတွေ အရှက်ကွဲမှာကွ”
စကားအရှည်ကြီးပြောပြီး မောသွားသလို ရေနွေးငှဲ့ပြီး တကျိုက်ကျိုက်တယ်။ အမူးလည်း တော်တော်ပြေသွားပုံပဲ။
“ကိုနိုင်တို့ စေ့စပ်ပွဲက ဘယ်တော့လဲ”
“ဟာ မဟုတ်တာ ကိုနိုင်ရာ။ မလုပ်ပါနဲ့။ မသက် ရွာလည်နေမှာပေါ့။ သွားလိုက်ပါဗျာ”
“ကဲပါ ကိုနိုင်ရာ။ မျက်နှာပျက်စရာ မလုပ်ပါနဲ့။ မသက် ရွာလည်မှာပေါ့။ သွားလိုက်ပါဗျာ”
“ကဲပါကိုနိုင်ရာ။ မျက်နှာ ပျက်စရာတွေတော့ မလုပ်ပါနဲ့။ ကလေးတွေမှ မဟုတ်တာ။ ခုည ကျနော်လိုက်ပို့မယ်။ အိမ်ပြန်လိုက်။ ကျနော်အပြန်ကျ မသက်ဆီဝင်ပြီး မနက်ကို လမ်းကြောင်း ရှင်းထားဖို့ ဝင်ပြောပေးမယ်။ ကျနော်စီစဉ်မယ်ဗျာ။ ဘာမှ မပူနဲ့ စိတ်ချလက်ချပြန်။ ဟုတ်ပြီလား”
ကိုနိုင် ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ ငူငူကြီး ထိုင်နေတယ်။ ခဏနေတော့မှ
“ငသိုက်။ ငါ့ကိုလိုက်ပို့ကွာ။ မင်းပြောသလိုပဲ လုပ်ပေးတော့” တဲ့
မိန်းမနဲ့ ဆိုင်ကိုထားခဲ့ပြီး ကိုနိုင့်ကို ပြန်ပို့ဖို့ စက်ဘီးထုတ်လိုက်တယ်။ သူ့မိန်းမကတော့ မျက်စောင်း တခဲခဲနဲ့ပေါ့။ နေရာတကာ ပါလေရာ လုပ်ချင်တဲ့ သူ့ကို သိပ်မကြည်ချင်ဘူး။
“နင့်အစ်ကို အကြောင်းတော့ မပြောချင်ပါဘူး သားရယ်”
ခုမှ ဝင်ထိုင်ပြီးပြီးချင်း ချွေးတောင် မသုတ်ဘဲ အမေကပြောတော့ သူက …
“ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့။ အမေကို မိုက်ရိုင်းတာလေ။ ငါ့မှာ ဒီတကောင်ပဲ လူပျိုမို့လို့ သူနဲ့ နေပါတယ်။ သူ့ဒုက္ခခံရတာနဲ့ သေလိ်မ့်မယ်”
“သူ့ ဗိုက်ထဲမှာ အရက်ရှိနေရင် အရမ်းသဘောကောင်းသလောက် အရက်မဝင်ရသေးရင် ငါ့ကိုပဲ ပြဿနာရှာချင်နေတာလေ။ မနေ့က ငါ အပြင်ခဏသွားတာကို အပြင်ချည်းထွက် နေတာပဲ ဘာပဲနဲ့ ဆူလိုက် ပြောလိုက်တာများ ငါ့ကိုသူသမီးကျနေတာပဲ”
“ကိုကြီးအကြောင်းလည်း သိသားနဲ့အမေရာ။ သူက မပြောတတ် မဆိုတတ်တာကလွဲရင် သဘောကောင်းပါတယ်။ ကဲ ကဲ အမေလက်ဘက်ရည် သောက်လိုက်ဦး”
“အေးဟယ်။ အမေ့မှာလည်း ကျန်တဲ့ဟာတွေက အိမ်ထောင်တွေခွဲ၊ မအားမလပ်နဲ့ အမေ့ဆီကို လည်း မလာနိုင်၊ ငါသွားလည်း မရှိနဲ့ သားဆီကိုပဲ လာ လာ ပြောရတယ်။ သားကတော့ အထိုင်ကကိုးကွယ်”
အမေက လက်ဘက်ရည်သောက်ရင်း သူ့ဆိုင်က လက်ဘက်ရည် ကောင်းတာကော၊ အစ်ကိုကြီးက အရက်တွေ အရမ်းသောက်တာကော၊ အစ်ကိုကြီး ရည်းစားနဲ့တွဲနေတာ ကြာပြီ ခုထိမယူကြသေးဘူး ဆိုကော၊ တရစပ် ပြောနေလေရဲ့။ သူကတော့ ကြားဖူးပြီးသား အကြောင်းအရာတွေမို့ အမေ စိတ်ချမ်းသာအောင် အင်း လိုက်ယုံမှတပါး ….။
သူ့ကို မိန်းမက နာမည်ပေးထားတယ် ဟစ်တိုင်ကြီးတဲ့။ ဟုတ်လည်း ဟုတ်တယ်။ အရင်က သူ့ကို ဒီလောက်ရင်ဖွင့်စကားတွေ မပြောကြဘူး။ ဒီလက်ဘက်ရည်ဆိုင် ဖွင့်မှပဲ တချို့ဆို ငိုယို နေလို့ မနည်းချော့ရတာ ရှိသေး။ ကြာရင် သူ ရူးလိမ့်မယ်။
လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်ပြီး တနှစ်အကြာမှာ သူ တော်တော်စိတ်ညစ်နေပြီ။ သူကိုက ဖင်မငြိမ် ချင်တာလည်း ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပီတာဇော်မြင့်ကို ထောက်ခံသောအားဖြင့် သူကိုယ်တိုင် မရူးခင် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်လေးကို ပိတ်လိုက်တယ်။ ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာထက် လွှဲရောင်းလိုက် တာပါ။ သူ့မိတ်ဆွေ ကိုဝကြီးကို လျှော့လျှော့ ပေါ့ပေါ့နဲ့ပဲ ပစ္စည်းအကုန် ဆိုင်ခန်းပါ လွှဲရောင်း လိုက်တယ်။
အဲဒီကစပြီး သူ့ဆီ ဘယ်သူမှ လာရင်မဖွင့်တော့ဘူး။ သူ တော်တော်စိတ်ချမ်းသာ နေတယ်။ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ဘဲ ရှိတာလေး ထိုင်စားနေရတာက အရသာ ရှိလိုက်ပါဘိချင်း။ တခုပဲ။ သူ့မိန်းမ …. ။ တော်တော်နားပူတဲ့ မိန်းမပေါ့။ တနေ့တနေ့ သူ အလုပ် မလုပ်ရကောင်းလား၊ ထိုင်နေရ ကောင်းလားနဲ့ တဆူဆူ တပူပူ ဆိုတော့ နားညည်းလာရော။ တရက် … မခံနိုင် လွန်းတာနဲ့ ရန်ထဖြစ်ကြရော ….။
မိန်းမလည်း ငိုယိုပြီး အိမ်ပေါ်က ဆင်းသွားလေရဲ့။ ရင်ထဲမှာ မွန်းကျပ်နေတယ်။ အဲဒီလောက် တောင် နားလည်မှု မရှိတဲ့ မိန်းမအကြောင်း တယောက်ယောက်ကို ပြန်ပြောပြချင်နေတယ်။ သူ့အတွေးထဲ ပထမဆုံးရောက်လာတဲ့ သူက အောင်နိုင်ကြီး။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီကောင်ကို ဖမ်းရတာထက်စာရင် လေကိုဖမ်းရတာကမှ လွယ်ဦးမယ်။ နောက်ထပ် အတွေးထဲကို ဆက်တိုက်ရောက်လာတယ်။ ကိုထွန်းထွန်းမင်း … သူက ယောက္ခမအိမ်မှာ နေရတာဆိုတော့ သူ့ကိုပယ်တယ်။ တရုတ်ကြီး ဆိုတဲ့ ကောင်ကလည်း မိန်းမ ကြောက်ရတဲ့ ကောင်။ အပြင်ကို ခေါ်ထုတ်ဖို့ မလွယ်ဘူး။ ကိုနောင်ကြီး၊ ကိုအောင်မိုး၊ ကိုချင်းမြင့် … ဒီလူပျို ကြီးတွေကျတော့ ရင်ဖွင့်ဖို့အရေး အရက်တိုက်ရဦးမယ်။
ကိုဝကြီး … ဟော သူခုမှ သတိရတယ်။ ခုဏက ဘာလို့ မေ့နေပါလိမ့်။ သူ့လက်ဘက်ရည်ဆိုင် လက်လွှဲရောင်းလိုက်တဲ့ ကိုဝကြီး။ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ရင်ထဲမှာ စကားလုံးတွေစီပြီး ကိုဝကြီးရဲ့ ဆိုင်ကို ထွက်လာခဲ့တော့တယ်။
ဟိုရောက်တော့ သူ့ရှေ့မှာ သူ့လိုပဲ ရင်ဖွင့်နေတဲ့ မိန်းမတယောက်ရှိလို့ လက်ဘက်ရည် တခွက်သောက်ရင်း မရိုးမရွနဲ့ ထိုင်စောင့်နေလိုက်ရသေးတယ်။
တကယ် … တကယ် … ။ သူက ဘာမဆို လက်တွေ့မှယုံတာ။ လက်တွေ့သမားလေ …။
Wednesday, September 24, 2008 | Labels: ဝတ္ထုတို |2Comments
“သရဲသကြားလုံး” ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးက ၂၀၀၃ ခုနှစ် အတွင်းမှာ ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းမှာ ပါခဲ့တာပါ။ သူငယ်ချင်း မိသားစု တစုကို စချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ရေးထားတာ ဖြစ်ပေမယ့် အဲဒီအချိန်က ကျမ အထင်လွဲခံခဲ့ရတယ်။ သူတို့က စ တာလို့မမြင်ဘဲ ကျမက တမင်နှိမ်ချချင်လို့ ရေးခဲ့တယ်ဆိုပြီး ထင်ခဲ့ကြလို့ ကျမကို ၅ လ ၆ လလောက် စကားမပြောဘဲ နေခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ ကျမကိုဘာကြောင့် မခေါ် မပြောလဲ ဆိုတာ ကျမလုံးဝ မသိခဲ့ဘူး။ တခြား သူငယ်ချင်း တယောက် ပြောပြမှပဲ သိရတော့ တော်တော် အားနာ ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုချိန်မှာ အဲဒီဝတ္ထု လေးထဲက ဇာတ်ကောင် ကလေးတွေတောင် အရွယ်တွေ ရကုန်ကြပြီဆိုတော့ စိတ်မဆိုးနိုင်တော့ဘဲ ရယ်ရယ် မောမော ပြောနိုင်ကြပြီလို့ ထင်လို့ ဒီဝတ္ထုလေးကို ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ သူငယ်ချင်း ကိုဗိုကယ်ကြီး (ကျမတို့ အခေါ်) နဲ့ စိုးစိုးရယ် သူတို့ သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဝေယံနဲ့ ကွတ်ကွတ်ရယ်ကို သတိရရင်း ဒီဝတ္ထုလေး အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုကြိုင်ဝင်းတယောက် သူ့ဆိုင် ဆိုင်းဘုတ်ကလေးကို မမြင်ဘူးသလို စိုက်ကြည့်နေသည်။
မျက်လုံးကို အောက်နည်းနည်း ရွှေ့လိုက်တော့
“ကာဆင်ဘိုင် ရှပ်အင်္ကျီ အထူးချုပ်သည်”
“မာမွတ် ထီးပြင်ဆိုင် မီးခြစ်ဂတ် (စ်) ထည့်သည်”
ကဗျာမဆန်လိုက်တာ။ သူ့ဆိုင်းဘုတ်ကလေး ကြည့်ပြီး ကြည်နူးမလို့ လုပ်တုန်းရှိသေးသည် အောက်က ဆိုင်းဘုတ် ၂ ခုက မျက်စေ့ထဲ ကန့်လန့်ကြီး ဝင်လာ၏။ ဒါပေမယ့် သူ ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါ။ ဒီဆိုင်ခန်းလေးကို သူတို့ သုံးဦး စပ်တူငှားထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အခန်းလေးထဲမှာ မှန်အထူတင်ထားသည့် သူ ပန်းချီဆွဲသော စားပွဲလေးတလုံး။ ဦးကာဆင် ဘိုင်၏ အပ်ချုပ်စက်တလုံး ချထားသည်။ ကိုမာမွတ်၏ ထီးပြင်လျင် ထိုင်သော ကုလားထိုင် ကတော့ ဆိုင်ဝမှာချထားသည်။ ဆိုင်ဝမှာ ကိုမာမွတ်က သူထီးပြင်သော တံဆာပလာများနှင့် မီးခြစ် အသုံးအဆောင်များထည့်သည့် ပုံးတပုံး ချထားသည်။ မျက်နှာကျက်၏ အဝမှာတော့ ထီးအမိုး အသစ်များ၊ ကိုင်းများနှင့် ထီးရိုးအသစ်များ ချိတ်ဆွဲထားသည်။
သူတို့သုံးယောက်က ဘာသာရပ်မတူသော်လည်း တဦးနှင့်တဦး နားလည်မှုရှိသည်။ တခါတလေ သုံးယောက်ဆုံချိန် အလုပ်လည်း အားနေသည်ဆိုလျင် အမျိုးမျိုးသော ခေါင်းစဉ်ခွဲ များကို ဆွေးနွေးကြသည်။ သည်နေရာမှာတော့ ကိုကြိုင်ဝင်းက ဆရာကြီးဖြစ်သည်။ ကျန်သည့် ၂ ယောက်က ပါးစပ်အဟောင်းသားနှင့် နားထောင်နေရသည်။ ကိုကြိုင်ဝင်း ပြောပြသည့် ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာခြင်း အကြောင်းများ၊ အိုဇုန်းလွှာ၊ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၊ အင်တာနက် စသည်တို့ကို သူတို့ ကြားလည်းမကြားဖူး၊ နားလည်းမလည်။ ကိုကြိုင်ဝင်း ပြောပြ လို့သာ သူတို့ သိရခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ကိုကြိုင်ဝင်းကို သူတို့က အထင်ကြီးသည်။ ကိုကြိုင်ဝင်း ပုံတူ တပုံဆွဲပြီးသွားတိုင်း သူတို့ ၂ ဦး အံ့သြလို့ မဆုံး။
ဒီမြို့ကလေးရဲ့ ဈေးလေးထဲက နေ့စွဲတွေထဲမှာ သူတို့ ဆိုင်ကလေးက အလိုက်သင့် ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် စီးဝင်မျောပါလျှက်ရှိသည်။ ကိုကြိုင်ဝင်း၏ အလုပ်သဘောကို နားမလည် သော်လည်း နှစ်ရှည်လများ အတူတူနေလာတာ ကြာတော့ ဦးကာဆင်ဘိုင်ကော ကိုမာမွတ်ပါ ကိုကြိုင်ဝင်းမရှိတောင် ပုံတူအပ်မည့်သူများကို လက်ခံထားတတ်ပြီ။ ဘယ်ဆိုဒ်ဆိုရင် ဘယ်လောက် ဆိုတာလောက်တော့ ဈေးစကားပြောတတ်နေပြီ။ ဒီတော့လည်း ကိုကြိုင်ဝင်း တယောက် ဘက်ဖက်ရည်ဆိုင် အေးအေး ဆေးဆေး ထိုင်နိုင်ပြီပေါ့။ သူ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် သွားထိုင်တာကို ဟို နှစ်ယောက်က လုံးဝခွင့်လွှတ်သည်။ သူပြန်လာရင် တခုမဟုတ် တခု အသစ်အဆန်း သတင်းများ ကြားရတတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဒီဆိုင်လေးထဲမှာ သူက ဆရာကြီး။ အရေးပါ အရာရောက်သူ။ သူ တနေ့ ဆိုင်မထွက်လျင် တနေ့ သတင်းများ မသိရ သောကြာင့် ကျန် ၂ ယောက်မှာ သူ့ကိုသာ နေ့တိုင်းမျှော်ကြရသည်။
ဒီဆိုင်လေးမှာ မှမဟုတ်။ သူက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာလည်း ဆရာကြီးဖြစ်သည်။ လက်ဖက် ရည် ဆိုင်က သူ့သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ကြတဲ့ ထွန်းထွန်းမင်းတို့ သိုက်စိုး တို့လည်း သူ့ကိုပဲ မျှော် ရသည်။ အဲဒီမှာတော့ ခေါင်းစဉ်က တမျိုး။ ဂီတ နှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများ ဆွေးနွေးကြသည်။ ဆွေးနွေးသည် ဆိုခြင်းထက် နာကြားသည် ဆိုလျင် ပိုမှန်မည်။ သူက စာလေးပေလေးလည်း မတောက်တခေါက် ဖတ်ထားတော့ ပြောနိုင်သည်ပေါ့။
စတိဗ်ဗိုင်း၊ ဂျိုးစထရိန်နင်၊ လက်ဇဗလင်၊ အော့ဇီအော့ဇဘွန်း စသည့် အနောက် ဂီတဘိုးအေ များ၏ နာမည်များကို ရွတ်ကာပြောတတ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းများ ဆိုရင်လည်း ကိုကြိုင်ဝင်းကို ဘယ်သူမှမမီ။ ဒီတော့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာလည်း သူက ဆရာကြီးပေါ့။
အိမ်မှာတော့ လေဒီကြိုင်ဝင်းက ဆရာကြီးဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ ကိုကြိုင်ဝင်းက ပန်းချီဆရာဆိုသော အမည်ကိုသာ ခံယူထားပြီး အိမ်၏ စီးပွားရေးကို ဟုတ်ဟုတ်ငြားငြား ရှာဖွေပေးသူ မဟုတ်။ သူ ပန်းချီဆွဲလို့ ရသမျှကလေးက သူ့ဆိုင်ခန်းခတောင် အနိုင်နိုင် ဖြစ်သည်။ တကယ်စီးပွားရှာသူက လေဒီကြိုင်ဝင်း။ သူက အထည်များကို မင်္ဂလာဈေးကယူပြီး အိမ်တွေမှာ လပေးနှင့် ပြန်ရောင်းသည်။ ဒီအလုပ်က ခြေတိုသည် ဆိုသော်လည်း မြတ်မြတ် ကလေး စားရသည်။ လေဒီကြိုင်ဝင်းတို့က ယောက်ျားဘာလုပ်နေတယ် ဆိုတာလေး ပြစရာ ရှိအောင် ဆိုင်ဖွင့်ပေးထားခြင်း ဖြစ်၏။ တကယ်က ကိုကြိုင်ဝင်း ဆိုင်မထွက်လည်း အိမ်၏ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေနေတာ ပါပဲ။
ဒီနေ့တော့ လပြည့်နေ့မို့ ဈေးပိတ်သည်။ ဒီလိုနေ့မျိုးမှာမှ ကိုကြိုင်ဝင်းတို့ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူနိုင်သည်။ အသစ်စက်စက် ဝယ်ထားသော ဒီဗီဒီ စက်ကလေးနှင့် သီချင်း ဟစ်လိုက်ဦး မည် ဟု စိတ်ကူးထားသည်။
ကိုကြိုင်ဝင်းက သီချင်းဆိုလည်းကောင်းသည်။ လူပျိုတုန်းကဆို ပွဲမရှိလိုက်နဲ့ ကြိုင်ဝင်းတို့ ပါပြီးသား ဆိုတာမျိုး။ သူ့အသံကို သူငယ်ချင်းများက လေးဖြူနဲ့တူသည်တဲ့။ သူကလည်း လေးဖြူသီချင်းဆို စီးရီးတိုင်း အလွတ်ရပြီးသား။ သူငယ်ချင်းများက သူ့ကို “လေးမဲ” ဟု အမည်ပေးထားသည်။ သူကလည်း ကျေနပ်သည်။ ဒီ ဒီဗီဒီ စက်ကလေးကိုလည်း မိန်းမကို အတင်းမရမက ပူဆာပြီး ဝယ်ခိုင်းထားရခြင်း ဖြစ်သည်။ လေဒီကြိုင်ဝင်းကလည်း သူ့ယောက်ျား သီချင်းဆိုတာ ဝါသနာပါတာသိတော့ အိမ်ကပ် ပြီးရော ဆိုပြီး ဝယ်ထားပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
သီချင်းတပုဒ် စဆိုပြီး တဝက်တောင် မရောက်သေး လေဒီကြိုင်ဝင်း သူ့ရှေ့မှာ လာရပ်သည်။
“ဒီမှာ ကိုကြိုင်ဝင်း ရှင်သီချင်းဆိုနေတာ ခဏရပ်ပါဦး။ ကျမ ဒီနေ့ ကြွေးတွေ လိုက်တောင်းစရာ ရှိတယ်။ အဲဒါ ကလေး ၂ ယောက် ကြည့်ထားလိုက်ဦး နော်”
ကိုကြိုင်ဝင်း ခေါင်းညိတ်လိုက်ရသည်ပေါ့။ ဘာများ တတ်နိုင်ဦးမည်နည်းပေါ့လေ။ ဒါတောင် လေဒီကြိုင်ဝင်းက မပြီးသေး။
“ရှင်ဈေးပိတ်တဲ့ နေ့ကလေးပဲ အိမ်ကို စိတ်ချလက်ချ ထားခဲ့ရတာ။ ရှင့်ကို စိတ်ချပါရစေနော်”
“မင်းကမလည်းနဲ့ ဒီမှာ နှစ်ကောင်လုံး ချောင်းတွေ တဟွတ်ဟွတ်နဲ့။ သကြားလုံးတွေ အချို တွေ မကြွေးနဲ့သိလား”
“နောက်သလို ပြောင်သလို လုပ်မနေနဲ့။ အကြီးကောင်ကို စာကျက်ခိုင်း။ ပြီးမှ ဆော့ပစေ။ အငယ်ကောင်ကိုတော့ နေ့ခင်းတရေး သိပ်လိုက်ဦးနော်။ ကဲကဲ နောက်ကျနေပြီ။ သွားမယ်”
ပြောပြောဆိုဆို လေဒီကြိုင်ဝင်း ထွက်သွားသည်။
“အိပ်မက် …. ကဗျာ”
စက်ကိုပြန်ဖွင့်ပြီး လေးဖြူ၏ အိပ်မက်ကဗျာကို ဆိုရင်း ခိုးရပ်စ်ပိုဒ် အရောက်မှာ အနားကို အကြီးကောင် ဝေယံ ရောက်လာသည်။
“ဖေ့ စက်ကြီး ပိတ်ထားလိုက်ဦး။ ဒီမှာ သား စာမေးမလို့”
“အေး အေး ပြော ဘာမေးမှာလဲ”
“အဖြူရောင် ပန်းဆယ်မျိုး ကို ရေးပြပါတဲ့”
“ဒါများကွာ။ လွယ်လွယ်လေးပါ။ တစ် စပယ်ပန်း”
“ဟာ ဒါတော့ သားလည်းသိသားပဲ”
“နှစ် .. နှစ်က စကားဖြူပန်း”
“သုံး … သုံးက ဟိုအိမ်ရှေ့က ပန်းလေးတွေကွာ။ သိပြီ စကြာပန်း”
“လေးက သဇင်ပန်း၊ ငါးက ဇွန်ပန်း”
“ဇွန်ပန်းဆိုတာလား။ အဖြူရောင် အပွင့်သေးသေးလေးတွေ။ မွှေးတယ်ကွ။ နောက်တော့ ဖေဖေတွေ့ရင် သားကိုပြမယ်။ အခုတော့မှတ်ထားလိုက်ဦးနော်”
ဝေယံသိပ်ကျေနပ်ပုံမရပါ။ တကယ်တော့ ကိုကြိုင်ဝင်း ကိုယ်တိုင်လည်း ဇွန်ပန်းကို သေသေချာချာ မသိ။
“ထားပါတော့ ဒါဆို ခြောက်”
“ခြောက်က ဂန္ဓမာပန်း အဖြူ”
“မင်းကလည်း အဖြူရောင်ပန်း ဖြစ်ရင်ပြီးရောပေါ့”
“ဒါဆို သားသိပြီ နှင်းဆီပန်းအဖြူတို့ မေမြို့ပန်း အဖြူတို့ …။ ရပြီ ဖေဖေ ဆက်ဆိုချင် ဆိုတော့”
ဝေယံအနားက ထွက်သွားလို့ မိုက်ကို ပြန်ကိုင်မည်အလုပ်တွင် …
အနားကို အငယ်ကောင် ကွတ်ကွတ် ရောက်လာပြန်သည်။ ကွတ်ကွတ်က ကိုကြိုင်ဝင်း လက်ထဲက မိုက်ကို အတင်းလုသည်။ ကိုကြိုင်ဝင်း ဘာမှ လုပ်မရတော့။ ကွတ်ကွတ်က ခုမှ သုံးနှစ်တောင် မပြည့်သေးဘူး ဆိုတော့ ဘာမှ သိပ်နားမလည်သေး။ ဆော့ဖို့ပဲ သိသည်။ ကိုကြိုင်ဝင်း၏ သီဆိုဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ်ကို ဒီမှာပင် ရပ်နားထားလိုက်ရသည်။
ဒါပေမယ့် လက်တော့မလျော့နိုင်သေး။ တခုရှိသေးသည်။ ကွတ်ကွတ်ကို သိပ်လိုက်လျင် သူ ဆက်ဆိုလို့ ရပြီ။ ကွတ်ကွတ်ကို ပွေ့ချီပြီး ပုခက်ထဲ ထည့်ကာ “အမ် ပလပ်” အစီအစဉ် စတင်လိုက်သည်။ ကွတ်ကွတ်က ငြိ်မ်ငြိမ်မနေ။ ပုခက်ထဲမှာ လှုပ်ရွပြီး ဆော့ချင်နေသည်။ တော်တော်နှင့် မအိပ်။ ကိုကြိုင်ဝင်းရသမျှ သားချော့တေး ကုန်သလောက်ရှိပြီ။ ဒီတော့ ဖခင် တို့၏ အာဏာပြမှ ဖြစ်တော့မည် …။
“ဟေ့ကောင် အိပ်တော့ မင်း ငါ့အကြောင်း သိတယ်မဟုတ်လား”
“သိတယ် ဖေဖေ့ကျောင်းက အမှတ် ၁”
သူက “အကြောင်း” လို့ပြောတာကို ကလေးက “ကျောင်း” ဟု ကြားသည်။ လေဒီကြိုင်ဝင်းသာ ရှိရင် မျက်စောင်းအထိုး ခံရဦးမည်။ ကဲ တနည်း ပြန်လှည့် ချော့ကြည့်မည်။ ကွတ်ကွတ်က သူ့ကို လူကြီးဖြစ်ပြီဟု ပြောလျင် သဘောကျသည်။
“သားက လိမ်မာပါတယ်ကွာ။ လူကြီးဆိုတာ ဒီအချိန်အိပ်ရတယ်ကွ”
“ဖေဖေပဲ ပြောပြီးတော့ လူကြီးဆိုရင် ချိုင်းမွှေးပေါက်တယ်ဆို” ဆိုပြီး သူ့ချိုင်းကိုလှန်ပြ နေပြန်သည်။ ကိုကြိုင်ဝင်းနဲ့ ကွတ်ကွတ်တို့ရဲ့ ချာချာလည် ဇာတ်လမ်းကို ကွတ်ကွတ်တို့ အဘွား ကိုကြိုင်ဝင်းရဲ့ အမေရောက်လာပြီး ဖြေရှင်းပေးလိုက်သည်။ သူ့အဘွား သိပ်တော့ လည်း ခဏလေးနှင့် အိပ်ပျော်သွားသည်။ ခုမှပဲ စိတ်အေးလက်အေး သီချင်းဆို ရတော့မည်။ ကွတ်ကွတ်က သီချင်းသံကြောင့်တော့ မနိုးတတ်။ သီချင်းစဆိုမည် ဆိုပြန်တော့ ဝေယံက တစခန်း ထပြန်သည်။
“ဖေဖေ သား သကြားလုံး စားချင်တယ်”
“မင်းကို မင်းအမေက သကြားလုံး မစားရဘူးလို့ မှာထားတယ် မဟုတ်လား။ မင်းတို့ ချောင်းဆိုး နေတယ်ဆို”
“တလုံးထဲပါ ဖေဖေရာ။ ကွတ်ကွတ်လည်း အိပ်နေတုန်း သားကို တလုံးလောက် ဝယ်ကျွေး ပါနော်”
ဝေယံက သနားစဖွယ် တောင်းပန်သည်။ ဒီကောင်က အချိုသိပ်ကြိုက်သည်။ သကြားလုံးဆို အသေအလဲ။ ဒါကြောင့်လည်း သူ့သွားတွေက ပိုးစားပြီးမဲနေလေသည်။ ဝေယံ၏ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ကိုကြိုင်ဝင်း အကြံရပြီ …. ။
“ဒါဆို သားခဏနေဦး ဖေဖေ သွားဝယ်လိုက်ဦးမယ်”
ကိုကြိုင်ဝင်း အပြင်ခဏထွက်သွားပြီး ပြန်လာတော့ လက်ထဲမှာ သကြားလုံး ပါလာသည်။ ဝေယံ ဆန္ဒ ပြည့်သွားပြီ။ သကြားလုံးကို ဖောက်ပြီး ပါးစပ်ထဲ ပစ်ထည့်လိုက်သည်။ ဝေယံ၏ မျက်နှာမှာ သရဲတကောင်နှင့် ဆုံတွေ့လိုက်ရသလို ရုတ်တရက် ရှုံ့တွသွား၏။
“အေး အဲဒါ သရဲသကြားလုံး လို့ ခေါ်တယ်။ အပြင်က အရမ်းချဉ်တယ်ကွ။ ဒါပေမယ့် အထဲကျရင် ချိုသွားရော”
ဝေယံက အထဲမှာ အချိုရှိသည် ဆိုတော့ ကျိတ်မှိတ်ပြီး စုပ်နေသည်။ ခဏနေတော့ ကိုကြိုင်ဝင်းက …
ခဏကြာတော့ ဝေယံဆီမှ ဝမ်းသာအားရနှင့် အသံထွက်လာသည်။း
“ဟာ ဟုတ်တယ်။ ချိုပြီဖေဖေ။ ချိုပြီ”
“အေး ဒါဆို မင်းပါးစပ်ထဲက ထုတ်လိုက်တော့”
ဝေယံက သူ့အဖေကို ခပ်ကြောင်ကြောင် တချက်ကြည့်ပြီး ပါးစပ်ထဲက သကြားလုံးကို ထုတ်ပေးလိုက်သည်။ ကိုကြိုင်ဝင်းက သကြားလုံးကိုယူပြီး သူ့ပါးစပ်ထဲ ပစ်ထည့်ကာ ဝါးစား လိုက်သည်။
ဝေယံက ပထမတော့ နားမလည်သလို ကြည့်နေရာက ဒေါသထွက်ကာ သူ့အဖေဆီက သကြားလုံးကို ပြန်တောင်းတော့၏။ ကိုကြိုင်ဝင်းက အိမ်ထဲတွင် ပတ်ပြေး၊ ဝေယံက နောက်က ပြေးလိုက်ကာ အော်ငိုနှင့် အတော်ကလေး ပွက်လောရိုက်သွားရာ ကွတ်ကွတ် လန့်နိုးသွား တော့သည်။ အိပ်ရေးမဝသော ကွတ်ကွတ်ကပါ ဂျီကျပြီး အော်ငိုနေသောကြောင့် ကိုကြိုင်ဝင်း ကြံရာမရ ဖြစ်နေစဉ် လေဒီကြိုင်ဝင်း အပြင်က ပြန်ဝင်လာသည်။ ထို့နောက် သရဲ သကြားလုံး ဇာတ်လမ်းနှင့်တကွ အဖြစ်အပျက်များကို ဝေယံက သူ့အမေအား ပြန်လည် တိုင်ကြား လေတော့သည်။
“ကိုကြိုင်ဝင်း ရှင်တမင်များ လုပ်နေတာလား ဟင်”
“မဟုတ်ရပါဘူးကွာ။ မင်းပဲ ကလေးကို အချိုမကျွေးနဲ့ ဆိုလို့ ငါက အချဉ်ကုန်အောင် ကျွေးပြီး ပြန်ယူလိုက်တာပါ”
လေဒီကြိုင်ဝင်း၏ မျက်စောင်း အစင်းတသောင်းလောက် ကိုကြိုင်ဝင်းကိုယ်ပေါ် ကျရောက်လာ သည်။
“အဲဒါကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ရှင့်ကို တနေ့တလေ ကလေးတွေနဲ့ နေခိုင်းတာ အဆင်ပြေ အောင် မနေနိုင်လို့ ပြောနေတာ။ တော်ပြီ တော်ပြီ။ ခါတိုင်းလို သူတို့အဘွားနဲ့ပဲ ထားခဲ့တော့မယ်။ ကဲ ရှင်လည်း ကြွချင်ရာ ကြွတော့”
မိန်းမဆီက အမိန့်ရလိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက်တည်း ကိုကြိုင်ဝင်းတယောက် ဇောင်းထဲက လွှတ်လိုက်သော မြင်းလို တချိုးတည်း လစ်ခဲ့တော့သည်။
လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ သူ့သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းများက သူအလာကို စောင့်မျှော် နေကြသည်။ ဒီနေ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သူလာမှ အားလုံးက သိရမှာ မဟုတ်လား။
လက်ဘက်ရည်ဆိုင်နှင့် ဈေးက သူ့ဆိုင်လေးမှာတော့ ကိုကြိုင်ဝင်းတို့က သရဲ သကြားလုံး တလုံးဖြစ်သည်။ အချဉ်မကုန်သေး သရွေ့ပေါ့လေ ….။ ။
Sunday, September 14, 2008 | Labels: ဝတ္ထုတို |3Comments
ဒီဝတ္ထုလေးကတော့ ဘာကြောင့်ရေးဖြစ်တယ် ဆိုတာ မပြောချင်တော့ဘူး။ ဖတ်လိုက်ရင် ရှင်းသွားမှာပါ။ တခုတော့ရှိတယ် မည်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါ တိုက်ဆိုင်မှုရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပါလို့ တော့ မပြောတော့ဘူး။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ရည်ရွယ်တဲ့သူကို ရည်ရွယ်ပြီး ရေးတာမို့လို့ပါ။ (အဟဲ အဲလိုစောစောစီးစီး ဝန်ခံ ထားလိုက်တော့ တတောရှင်းတာပေါ့နော်)။ “ဖွတ်ဒင်” ဆိုတဲ့ ဒီဝတ္ထု ကလေးကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ဖက်ရှင် မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခံခဲ့ရပါတယ်။
ကလေးက နည်းနည်း အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ မသွယ် စီးပွားရေး တခုခု လုပ်ဖို့ ကြံစည်ရပြီ။ အိမ်မှာ ထိုင်ပြီး ကိုစီတုတ်ရဲ့ ဆိုက်ကားနင်းခ တခုတည်းကို မျှော်ကိုးနေလို့ကတော့ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ မသွယ်က မုန့်မျိုးစုံ လုပ်တတ်သည်။ မသွယ်ရဲ့ လက်ရာကို အားလုံးက နှစ်ခြိုက်ကြသည်။ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနှင့် အမြတ်လည်း သိပ်မယူသောကြောင့် ရွာထဲက အားပေးကြသည်။
ဆနွင်းမကင်းထက်စာရင် ပူတင်းက လုပ်ရကိုင်ရတာ ပိုမိုလွယ်ကူသောကြောင့် ပူတင်းဖုတ်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက် သည်။ ပူတင်းတဗန်း ဖုတ်ကာ ရွာထိပ်မှာ ထိုင်နေလိုက်ရုံပဲ။ ကိုစီတုတ်ရဲ့ သူငယ်ချင်း ပန်းချီဆရာကိုကြိုင်ဝင်း က “ပူတင်း” ဆိုတဲ့ စာလုံးကို စာရွက်ပေါ်မှာ အကြီးကြီး ရေးပေးထားသည်။ တကယ်တော့ ဒီလို ရွာမှာ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ဘာတွေ တခမ်းတနား လုပ်နေစရာ မလိုပေမယ့် ကိုကြိုင်ဝင်းရဲ့ စေတနာကို လေးစားသော အားဖြင့် ချိတ်ထားလိုက်သည်။ တဗန်းကို ခဏလေးပဲ ရောင်းရသည်။ မသွယ်ကို အများဆုံးအားပေးသူများက ကလေးများဖြစ်၏။
မသွယ် ပူတင်းနှင့် အလုပ်ဖြစ်ပြီး ၄ ရက်လောက်အကြာမှာ ကိုအေး ပြန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုအေး ပြန်ရောက်လာခြင်းအတွက် ဝမ်းသာသူများထဲမှာ မသွယ်လည်း ပါသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရင်တခါက မသွယ်ရဲ့ ကြောင်ကလေးကို လည်ပင်းညှစ်သည့် ကိစ္စကိုတောင် အစမဖော်တော့။ ခုတော့လည်း ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နှင့် မသွယ်ရဲ့ သား တော်မောင်ကိုတောင် ဝင်ထိမ်းပေးနေလိုက်သေးသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ညကျရင်တော့ ကိုစီတုတ်နဲ့ ကိုအေးကို တလုံးလောက် ထောင်ပေးလိုက်ဦးမည်။ ပြီးတော့ ကလေးထိမ်းပေးနေသော ကိုအေး ကို မသွယ် လောကွတ်လုပ်လိုက်သည်။
“ဘာ မသွယ် နင်ဘာပြောလိုက်တယ်”
“ဘာပြောရမှာလဲ။ ပူတင်းစားမလားလို့ မေးတာလေ”
“နင်တို့ အဲဒါခက်တာပေါ့။ ပူတင်း ဟုတ်လား ... ပူတင်းလို့ ခေါ်တာ မှားတယ်ဟ”
“ဘာ ... ပူတင်းကို ပူတင်းလို့ခေါ်တာ မှားတယ် ဟုတ်လား။ ပူတင်းလို့ မခေါ်လို့ ဘယ်လို ခေါ်ရမှာလဲ”
မသွယ် နည်းနည်းတော့ ကျွဲမီးတိုသွားသည်။ ဘာတဲ့ ပူတင်းကို ပူတင်းလို့ ခေါ်တာ မှားသတဲ့။ ဒါဆို သူ့အမေတွေ သူ့အဘွားတွေ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အားလုံး ဒီလိုပဲခေါ်ခဲ့ကြတာပဲ။ သူ့ကျမှ ပူတင်းကို ပူတင်းလို့ခေါ်တာ မှားတယ် တဲ့။
“ကဲဆိုပါဦး။ ပူတင်းကို ပူတင်းလို့ မခေါ်လို့ ဘယ်လို ခေါ်ရမလဲ”
“သေသေချာချာ နားထောင်။ အသံထွက်တာ မှားနေလို့ ငါက ပြင်ပေးတာ။ ဖွတ်ဒင်လို့ ခေါ်ရမယ်၊ မှတ်ထား”
“ဘာ ဖွတ် .... ဒင် ဟုတ်လား”
“ဖွတ် ... ဒင် မဟုတ်ဘူးဟ။ တဆက်တည်း ဖွတ်ဒင်”
“ကျွတ် သွားစမ်းပါတော်။ ဒီမှာ ဈေးရောင်းမကောင်းရတဲ့ အထဲ။ မခေါ်နိုင်ပါဘူး။ ပူတင်းဟာ ပူတင်းပေါ့”
“ဒီမှာ မသွယ်။ နင်ဟာလေ အဲဒါကြောင့် ဆိုက်ကားသမား မယားဖြစ်ပြီး ခုလို ဈေးရောင်းနေရတာ သိလား။ နင်တို့ရဲ့ ဘဝတွေကိုငါက မြှင့်တင်ပေးချင်လို့ ပြောပြတာ။ ဒါက ဗရစ်တစ်ရှ် အင်္ဂလစ်ရှ် အသံထွက်အမှန် နားလည်လား”
မသွယ်မျက်စောင်းတချက် ဒိုင်းကနည်း ပစ်လွှတ်လိုက်သည်။ မဆီမဆိုင် သူ့ “ဖွတ်ဒင်” ဆိုတာကြီးကို အသံ မထွက်နိုင်တာနဲ့ပဲ မသွယ်ဆိုက်ကားသမား မယားဖြစ်တာကော၊ ဈေးရောင်းရတာကော စုံနေအောင် နှိမ်သည်။ ညကျ တလုံးထောင်ပေးမယ့် စေတနာလေးပါ ပျက်သည်။ ကိုအေးတယောက် ရွာကပျောက်သွားတဲ့ အချိန် တွေမှာ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့သလဲ မသိ။ ပရောဂတွေ ဘာတွေများ ကပ်ပြုနေသလား။ မသွယ် စိတ်လည်းညစ်၊ ဦးနှောက်လည်း ခြောက်သည်။ ခဏအကြာမှာတော့ ဒေါ်ဘူချီ ပူတင်း လာဝယ်သည်။
“မသွယ်ရေ။ ပူတင်းငါးတုံးပေးစမ်းပါ။ ဟဲ့ ပိုပိုသာသာ ထည့်နော်”
“ဒေါ်ဘူချီ ... ခင်ဗျားမှားနေပြီဗျ”
ဘေးမှာ ငုတ်တုတ် ထိုင်နေသော ကိုအေးက ဝင်ပြောခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဟဲ့ ကိုအေး မဟုတ်လား။ နင် အသည်းကွဲတာ ဘယ့်နှယ် နေတုန်း။ မမြင်တာ ကြာပြီနော်”
ဒေါ်ဘူချီက ကိုအေးပြောတာ ဂရုမစိုက်ဘဲ သူပြောချင်တာ စွတ်ပြောသည်။
“အဲဒါတွေ ထားလိုက်စမ်းပါ ဒေါ်ဘူချီရဲ့။ ဒီမှာ ကျနော်ပြောမယ်။ ခင်ဗျား ခုဏက မသွယ်ဆီက ဘာဝယ်တာလဲ”
“အဲဒါပြောတာပေါ့။ ခင်ဗျားတို့ မှားနေကြတာ။ ခင်ဗျား တို့နဲ့ မတွေ့တဲ့ အချိန်တွေမှာ ကျုပ်က အင်္ဂလိပ်စာကို သေသေချာချာ လေ့လာ နေခဲ့တာ။ သိရဲ့လား။ အဲဒီမှာ အမှားတွေ တွေ့တော့တာပဲ။ ဒီမှာဒေါ်ဘူချီ။ ပြင်ခေါ်လိုက် စမ်းပါ။ ပူတင်းမဟုတ်ဘူး ဖွတ်ဒင် လို့”
အဲဒီအချိန်မှာ မသွယ်လှမ်းပေးသော ပူတင်းထုပ်ကို ဒေါ်ဘူချီလှမ်းမယူခင် ကိုအေးက ကြားထဲက ဖြတ်ယူထား လိုက်သည်။
“ကဲပြောလေဗျာ ... ဖွတ်ဒင် ခင်ဗျား အသံထွက်တာ မှန်မှ ဒီအထုပ်ပေးမယ်”
“အမယ် ရာရာစစ။ နင်ကဘာမို့လို့ ငါ့လာသင်နေရတာလဲ။ မခေါ်နိုင်ဘူး။ ဝယ်လည်း မဝယ်တော့ဘူး။ ပူတင်း ဆိုတာ အဓိပ္ပယ်ရှိတယ်ဟဲ့။ စားချင်စရာလေး။ နင့်ရဲ့ ဖွတ်ဒင်ဆိုတာကြီးက ဘာမှန်းလည်း မသိဘူး။ ရွံစရာကြီး။ တော်ပြီ မဝယ်တော့ဘူး သွားမယ်”
ပြောပြောဆိုဆို ဆောင့်ကြီး အောင့်ကြီး နဲ့ ပြန်ထွက်သွားသော ဒေါ်ဘူချီကို ကြည့်ကာ ကိုအေးနှင့် မသွယ်တို့ ပါးစပ် အဟောင်းသားနှင့် ကျန်ခဲ့သည်။ မသွယ် အကြောင်းသိထားသော ကိုအေးမှာ မုန့်ထုပ်ကလေးကို ဗန်းထဲ အသာပြန်ထည့်ရင်း ထိုနေရာမှ ခွာရန်ပြင်သည်။ ဒါကို မသွယ်ကလည်း အလွတ်မပေး။
“ကိုအေး ရှင်ဟာလေ အရမ်း အရမ်းကြီးပဲ သိလား။ မမြင်တာကြာလို့ စေတနာလေး ထားမလား မှတ်တယ်။ စေတနာ ပျက်အောင် တော်တော်လုပ်တယ်။ တော်ပြီ တော်ပြီ ရှင့်ရဲ့ ဖွတ်ဒင်ကိစ္စ ရပ်တန်းက ရပ်ရင်ရပ်။ မရပ်လို့ကတော့ ကျုပ်ပါးစပ်နဲ့ တွေ့ပြီသာမှတ်”
ကိုအေး ပါးစပ်ပိတ်သွားသည်။ မသွယ်ဈေးရောင်းသည့်နားတွင် ဖိနပ်ခုထိုင်ပြီး စာအုပ်တအုပ်ကို သည်းကြီး မည်းကြီး ဖတ်နေ၏။ ခဏနေတော့ ချစ်စုမ ရောက်လာသည်။
“ကြီးသွယ် ပူတင်း တတုံး ဘယ်လောက်လဲ”
“သုံးဆယ် သမီးရေ ဘယ်နှတုံးလဲ”
မသွယ် ပူတင်းကို တုံးနေစဉ် ကိုအေး အနားကပ်လာပြန်သည်။
ချစ်စုမက ကြောင်တက်တက်နှင့် လှမ်းကြည့်သည်။
ချစ်စုမက သီချင်းဆိုသလို ပြန်ဖြေသည်။
“မှားတယ် သမီးရဲ့။ ပူတင်းမဟုတ်ဘူး။ ဖွတ်ဒင်”
“ဟာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဦးအေးကလည်း။ ပူတင်းပါ။ သမီးဖေဖေက ပူတင်းလို့ပဲ ခေါ်တယ်”
ချစ်စုမက သူ့အဖေကို တလောကလုံးတွင် အတော်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ထားသူ ဆိုတော့ သူ့အဖေနှင့် ကိုင်ပေါက်သည်။ ကိုအေးကလည်း နည်းနည်းမှ မလျှော့။
“ဖွတ်ဒင်လို့ ခေါ်မှ မှန်တယ် သမီးရဲ့။ ခေါ်ကြည့်စမ်း။ ဖွတ်ဒင်”
“ဟာ ... မခေါ်ချင်ပါဘူး။ သွားတော့မယ်။ ဟိုမှာ သမီးသူငယ်ချင်းတွေ စောင့်နေပြီ”
ကိုအေးက ချစ်စုမ လက်ထဲက မုန့်ထုတ်ကို ဆတ်ခနဲ ဆွဲယူထားလိုက်သည်။ ချစ်စုမက မုန့်ထုတ်ကိုပြန်လုသည်။
ကိုအေးကလည်း မလွှတ်။ ဆွဲရင်း လုရင်း ဖြင့် ကိုအေးလက်ထဲမှာ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ပဲ ကျန်ခဲ့ကာမုန့်က အောက်ကို ဘုတ်ကနဲ ပြုတ်ကျသွားတော့သည်။ ချစ်စုမ ငိုသံ ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ်လာသည်။ မသွယ်ဘာ လုပ်ရမှန်း မသိတော့။ နောက်ဆုံး ပူတင်းတတုံး ပေးလိုက်တော့မှ ချစ်စုမ အငိုတိတ်သွားတော့သည်။ ဒီနေ့အဖို့ တော့ ဈေးဆက်ရောင်းဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တော့။ သားတော်မောင်ကို ထိမ်းပေးသော ကျေးဇူးကြောင့်သာ ကိုအေးကို မသွယ် ဘာမှမပြောခြင်းဖြစ်သည်။ မဟုတ်လို့ကတော့ ဘယ်နေလိမ့်မလဲ။ နောက်တခု ကိုအေးက သူငယ်ချင်းအားလုံး၏ အပယ်ခံ မဟုတ်လား။
သူငယ်ချင်း အားလုံး၏ အပယ်ခံဆိုတာကလည်း ကိုအေးက သူ့ဟာသူထင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ သူ့ကို ဘယ်သူကမှ မပယ်။ ဘယ်သူကမှလည်း ဘာအပြစ်မှ တင်တာမဟုတ်။ မသွယ်တို့ အိမ်က ကြောင်ကို လည်ပင်း ညှစ်တုန်းက သူ့ကို နည်းနည်းပါးပါး ဝိုင်းပြောကြသည်။ အားလုံးက ပြီးတော့လည်း ပြီးသွားတာပါပဲ။ ကိုအေးကသာ သူ့ကို ဝိုင်းပယ်ကြသည်ဟု ထင်ကာ ရွာမှ ထွက်သွားခြင်းဖြစ်၏။
သတင်းသဲ့သဲ့ ကြားတာကတော့ ရွာကနေ မြို့မှာ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ သွားလုပ်နေတဲ့ ခိုင်မင်းစိုးတို့နဲ့ သွားနေသည် တဲ့။ ပြီးတော့ အဲဒီမှာလည်း ဘာတွေ မပြေလည်ဖြစ်လာသည်မသိ။ ရွာကို ပြန်ရောက်လာသည်။ လူကောင်ကြီးက ကျားကိုးစီး စားမကုန်သည့် ခန္ဓကိုယ်ကြီး ဆိုပေမယ့် စိတ်က အလွန်နုတော့ မသွယ်က လန့်သည်။ သူနှင့် အတိုက်အခံ သိပ်မလုပ်လို။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ဆိုင်သိမ်းလိုက်တာ အေးသည်။
နောက်တနေ့ မသွယ်ဆိုင်ထွက်တော့ အေးအေးဆေးဆေး။ ရာသီဥတုကလည်း သာသာ ယာယာနှင့် ဘေးဘီကို ကြည့်လိုက်တော့ ကိုအေး၏ အရိပ်အယောင်တောင် မမြင်ရ။ မသွယ်ဆိုင်ခင်းလိုက်သည်။ ဆိုင်ခင်းစမှာပဲ ပေါ်တက် ရောက်လာသည်။
“ဒေါ်လေးသွယ်။ ပူတင်း ၂ တုံးပေးပါ။ မြန်မြန်လေး လုပ်ပါနော်။ ညီမလေးစားဖို့ မေမေက ဝယ်ခိုင်းလိုက်တာ”
မသွယ် ပူတင်း ၂ တုံးလှီးပြီး ထည့်နေစဉ်မှာပဲ ဘယ်က ဘယ်လိုပေါ်လာသည်မသိ။ ကိုအေး .. အနာကို ရောက်လာသည်။
“ဟေ့ကောင် ပေါ်တက်။ မင်းဒီမုန့်ကို ဘယ်လိုခေါ်လဲ သိလား”
“မဟုတ်ဘူးကွ ဖွတ်ဒင်။ ဖွတ်ဒင်လို့ အသံထွက်ရတယ်”
ပေါ်တက်ကကြောက်တတ်သည်။ အကြောက်ကြောက် အလန့်လန့်နှင့် ဘာသံမှ ထွက်မလာ။
“ဖွတ် .... ဖွတ် .... ဒင်”
“ဟာ မင်းဟာကလည်း တဆက်တည်းဆိုကွ ဖွတ်ဒင်”
ပေါ်တက် မျက်ရည်များ ဝဲလာသည်။ ကိုအေးကလည်း မျက်လုံးကြီးများ ပြူးလာသည်။ မသွယ်မနေသာတော့။ ဝင်ပြောရတော့သည်။
“ကိုအေးရယ်။ ရှင့်ဟာကလည်း တော်ပါတော့။ ဟိုမှာ ငိုတော့မယ်”
“အဲဒါ မကြိုက်တာပေါ့။ ငါရွာကို ဘာလုပ်ဖို့ ပြန်လာတာလဲ သိလား မသွယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တဲ့ ကျောင်း ထောင်မလို့ဟ။ ပိုက်ဆံမယူဘဲ အလကား သင်ပေးမှာ။ နင်တို့က ဒီ ဖွတ်ဒင် လေးတောင် ပီအောင် မပြောနိုင်ရင် ဘယ့်နှယ် လုပ်ကြမလဲ”
ကိုအေးက အဆုံးရှုံးကြီး ဆုံးရှုံးတော့မည့် လေသံနှင့်ပြောသည်။ မသွယ် သက်ပြင်းကို ဟင်းကနဲ ချလိုက်သည်။ ကိုအေးတို့ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ထင်ရာမြင်ရာတွေ လုပ်ဦးမည်။ ထိုအချိန်တွင် မသွယ်နှင့် ကိုအေး စကားပြော နေတာကို အခွင့်အရေးယူပြီး ပေါ်တက် သုတ်ခြေတင်တော့၏။ မုန့်ထုတ်လည်း ယူမသွား။ ပိုက်ဆံလည်း ပေးမသွား။ သွားပြီ။ စီးပွားပျက်တော့မည်။ ကလေးများက မသွယ်ရဲ့ ပူတင်းဗန်းလေးရှေ့က ကျော်ကာ အခြား မုန့်များကို ဝယ်စားကြသည်။
“ဟဲ့ ကလေးတွေ ပူတင်းမစားကြဘူးလား”
မေးလျင် လှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်နှင့် သုတ်ခြေတင် သွားကြသည်။ မသွယ်ပူတင်း မရောင်းရတော့။ နောက်တော့ ပြန်ကြားရသည်။ ဦးအေးကြီးက ပူတင်းလို့ ခေါ်တဲ့ သူကို ရိုက်မယ်ဆိုလို့တဲ့။ ပြောလို့မရ။ ကိုအေးဆိုတဲ့သူက တကယ်လုပ်ချင် လုပ်မှာ။
ဒီနေ့လည်း မသွယ်ရဲ့ ပူတင်းဗန်းက အရာမယွင်းဘဲ ဆိုင်သိမ်းလိုက်ရသည်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကိုစီတုတ်နှင့်အဖွဲ့က ဝိုင်းစဖို့ ပြင်နေကြပြီ။ ပူတင်းမရောင်းရလို့ ထွက်ချင်နေတဲ့ ဒေါသများကို ကိုစီတုတ်အပေါ်မှာ ပုံချလိုက်သည်။
“ဟင် .. တော်က ဒီမှာ ဒီအရည်တွေ မြိုနေသိလား။ ကျုပ်မှာတော့ ဖတ်သီဖတ်သီနဲ့ ဈေးရောင်းထွက်နေရတယ်။ ရှင်က ဘာအသုံး ကျလဲ ဟင် ... ကျုပ်မှာ ရောင်းသာရောင်းရတာ ဘယ်သူကမှ ဝယ်စားတာ မဟုတ်ဘူးတော့ ... ဟီး”
ပြောရင်း ဝမ်းနည်းလာပြီး ငိုချလိုက်တော့ ကိုစီတုတ်နှင့် အပေါင်းအပါ လူပျိုကြီးမျာ ဖြစ်ကြသော ကိုချင်းမြင့်၊ ကိုအောင်မိုးနှင့် ကိုနောင်ကြီးတို့ သုံးယောက် ပြာပြာသလဲနှင့် ဝိုင်းမေးကြသည်။ မသွယ်က ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကို နတ်သံနှောပြီး ပြောပြလိုက်ရာ လူပျိုကြီး သုံးယောက်၏ ဒေါသတို့ ကိုအေးအပေါ် စုပြုံပြီး ကျရောက်ကုန်တော့သည်။
ဟုတ်တော့ဟုတ်သည်။ ဘာပဲပြောပြော မသွယ်က သူတို့ အရက်ရေချိန်မကိုက်လျင် ဖွက်ထားတာလေးတွေ ထုတ်ရောင်းနေကျ။ အမြည်းကို ဈေးတင်ရောင်းတယ် ဆိုပေမယ့် ဘာမှ ဝယ်မရနိုင်သည့် အချိန်မှာ မသွယ်ကိုပဲ အားကိုးကြရသည်။ သူတို့၏ ကျေးဇူးရှင်ကို စီးပွားပျက်အောင်လုပ်သည့် ကိုအေးအား သူတို့ ဆုံးမရလိမ့်မည် လာပစေဦး။
ပြောရရင်တော့ ကိုအေးရဲ့ ဆတ်ဆော့မှုကြောင့်လို့ပဲ ဆိုရလိမ့်မည်။ သူ့ဟာသူ ရွာကလေးမှာ တသက်လုံး ဒီလိုပဲ ခေါ်လာ ပြောလာကြတာ သူလာမှ ဘယ်သူက ပြင်ခေါ်ချင်ကြတော့မှာလဲ။ သူကတော့ သူ့ရွာလေးကို မြင့်တင်ချင်လို့တဲ့။ ဒါပေမယ့် သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ် အဆင် ပြေပြီးသား ဒီရွာကို ချက်ချင်းကြီး အတင်းအကျပ် ပြင်ချင်လို့ ရမတဲ့လား။
ကိုအေးလာတော့ အားလုံးက ဝိုင်းဝန်း ဆုံးမကြသည်။ ဆုံးမတယ် ဆိုတာကလည်း လက်မပါပါ။ ပါးစပ်နှင့်သာ ဆုံးမခြင်းဖြစ်သည်။ ရွာ အကျိုးကိုသယ်ပိုးတယ် ဆိုပေမယ့် သူများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် မလုပ်သင့်တဲ့ အကြောင်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဝိုင်းပြောကြ ခြင်းသာ။ အားလုံးက ကိုအေး စိတ်နုတယ်ဆိုတာ သိပြီးသား။ ကိုအေးရဲ့ ခံစားချက်တွေကိုလည်း နားလည်ပြီးသား ဖြစ်သည်။ ဘယ်သူမှ မသိလိုက်တာက ကိုအေး သူတို့ဆီမလာခင် ရွာထိပ်က ကြက်ပဲဆိုင်မှာ တပိုင်းဝင်တွယ်ခဲ့တာကို ဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းတွေက ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နာချပြန်တော့ ကိုအေး ဟတ်ထိသွားသည်။ သူ့ကြောင့် မသွယ်စီးပွားပျက် ရသည်။ သူ့စေဒနာတွေ ဝေဒနာ ဖြစ်ရသည်ဆိုကာ ချထားသော အရက်တလုံးကို သူတယောက်ထဲ ကျိတ်သွားပြီး မသွယ်တို့ တံခါး တချပ်လုံး ရစရာမရှိအောင် ရိုက်ချိုး သွားသည်။ အဲဒီကစပြီး ကိုအေးလည်း ရွာက တတိယ အကြိမ်မြောက် ပျောက်ကွယ် သွားတော့သည်။
ကိုစီတုတ် ဆိုက်ကား တရက်မထွက်ဘဲ အိမ်တံခါး ပြင်နေရသည်။ မသွယ်လည်း အဲဒီအချိန်ကစလို့ ပူတင်းဆိုတဲ့ အသံတောင် မကြားချင်တော့ အောင် ဖြစ်သွားသည်။ လူပျိုကြီး သုံးယောက်ကတော့ သူတို့ကြောင့် ထွက်သွားသော သူငယ်ချင်းကြီးကို လွမ်းသည်ဟု ဆိုကာ ဆိုင်ကယ်တစင်းနှင့် ဆိုင်တကာလှည့်ပြီး အရက်သောက်ကြသည်။ မူးမူးနှင့် မောင်းလာသော ဆိုင်ကယ်မှောက်သောကြောင့် ကိုချင်းမြင့်က ရှေ့သွားများ ကျွတ်သွားသည် (ကိုချင်းမြင့်က ကရင်လူမျိုးဆိုတော့ နောင်တွင် စောရှဲကျိုးဆိုသော အမည်တွင်သည်)။ ကိုအောင်မိုးက တတောင်ဆစ်နှင့် ဒူးများ စုတ်ပြဲ ယောင်ကိုင်းသွားသည်(ကိုအောင်မိုး၏ ငယ်နာမည်မှာ ဂွတိုဖြစ်သောကြောင့် နောင်တွင် ယောင်ယမ်းဂွတိုဟု ခေါ်ကြသည်)။ ကိုနောင်ကြီးကတော့ တညနှင့် တရက် သတိလစ်နေပြီး သတိပြန်ရချိန်မှာ ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်သွားသည်။ သူသတိရချင်တာကို သတိရပြီး သတိမေ့ချင်တာကို မေ့နေခြင်းဖြစ်သည်။ (ဥပမာ .. သူဖြတ်ချင်သော ရည်းစားကို လုံးဝ သတိမရတော့ဘဲ ရစရာရှိသော အကြွေးများကိုတော့ အသေးစိတ်မှတ်မိနေခြင်းဖြစ်သည်)။ ဒါပါပဲ။ ဖွတ်ဒင်။ ။
Tuesday, September 09, 2008 | Labels: ဝတ္ထုတို | 1 Comments
တကယ်တော့ ဘာလဲ သိပ်မသိပါဘူး။ အမမေငြိမ်းက လူနိုင်မို့လို့ tag တယ်တဲ့။ ဒီလောကကို ရောက်လာတာမကြာသေးတော့ ဘုမသိဘမသိနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးဝင်ဆင်နွှဲကြည့်တာပါ။ ဒီလိုပဲ tag လုပ်ရင် ရေးရတယ် လို့ ကြားဖူးတာကိုး။ မမိုးချို ပြောသလို ပြောရရင် သိပ်လည်း ပင်ပမ်းတာမဟုတ်ဘူးလေ ပေါ့။ ပြီးတော့ သူ့လိုပဲ စာရေးစရာ ရှိပေမယ့် ရေးရမှာ ပျင်းတာနဲ့ အတော်ပဲ ပေါ့။
ကိုယ့်ရဲ့နာမည် … တူးတူးသာ
ကိုယ့်ကိုသူငယ်ချင်းတွေက ဒီလိုခေါ်တယ် … တူးတူး ပေါ့၊ တချို့ကတော့ တူး တလုံးထဲ။ ငယ်တဲ့သူတွေကတော့ မတူးတဲ့ (ရုပ်ရှင်ထဲက ဟာသ သရုပ်ဆောင်အမကြီးသာ ပြေးမြင်လိုက်)
ကိုယ်ဒီမှာနေတယ် … ယာယီနေရာတခုပေါ့
ကိုယ့်ဆီဖုန်းဆက်ချင်ရင် … ဖုန်းဆက်မယ့်သူတွေက ကြွေးရှင်တွေပဲရှိမယ်ထင်တယ်။
အရောင်ဆိုရင် …. ခရမ်းပြာ
အဝတ်အစားဆိုရင် … တီရှပ်၊ ဂျင်းဘောင်းဘီရှည်၊ ချည်သားဘောင်းဘီရှည်
အစားအစာဆိုရင် …. အိုက်စကရင် (အင်း .. မေးထားတာ သောက်စရာကျတော့မပါဘူး)
ပစ္စည်းဆိုရင် … ဂစ်တာ
သီချင်းဆိုရင် … ရော့ခ်
စာရေးဆရာ … အများကြီးပဲ
စာအုပ် …. ဒါလည်း အများကြီးပဲ။ ဒါပေမယ့် ခင်တဲ့သူတိုင်းကို ညွှန်းမိတဲ့စာအုပ် တအုပ်တော့ရှိတယ် အဲဒါက ဂျွန်စတိန်းဘတ်ရဲ့ “တော်တီလာဖလက်” ကို ဆရာမောင်ထွန်းသူက “တို့ဘဝ တို့ကမ္ဘာ” ဆိုပြီး ဘာသာပြန်ထားတဲ့စာအုပ်။
လိုက်ဖ်စတိုင် …. ပေါ့ပေါ့ပါးပါး၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်၊ အေးရာအေးကြောင်းပဲ
ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာ … တခုထဲ ဆိုရင်တော့ စာဖတ်တာ ၄၊ ၅ ခုလောက်ပြောခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင် တော့ စာရေးတာ၊ သီချင်းဆိုတာ၊ ဂစ်တာတီးတာနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ ကိုပါ ထည့်လို့ရပါတယ်။
အလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင် …. ခုလောလောဆယ်ဆိုရင်တော့ ဆောလစ်ဂစ်တာကောင်းကောင်း တလုံး (တွဲလျက် အမ့်နဲ့ဘောက်စ်လေးပါ ပါရင်တော့ ပိုမိုက်သပေါ့)
ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆုံးသူက …. အမေ (ရန်တော့နည်းနည်းဖြစ်တယ်) နဲ့သားများ
ကိုယ့်ရဲ့အလေးစားဆုံးသူက … အဖေ ပါ
ကိုယ့်ရဲ့အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်း … ခင်ပွန်း (သူ့ကိုလည်း တနေရာထည့်မှဖြစ်မယ်လေ) နဲ့ ကျမရဲ့မောင်လေးပါ
ကိုယ့်ကိုအများဆုံးနားလည်မှုပေးနိုင်သူ … ကျမရဲ့ အကိုကြီးနဲ့ မောင်လေးပေါ့
ကိုယ့်ရဲ့အမုန်းဆုံးသူက … မမွေးသေးဘူး
ရင်အခုန်ရဆုံးအချိန် … သားငယ်လေးမွေးဖို့ ခွဲခန်းဝင်ခါနီးအချိန် (ခွဲမှာကိုရင်ခုန်တာ မဟုတ်ဘူး။ သားလေးကိုယ်လက်အင်္ဂါပြည့်စုံပါ့မလားဆိုပြီး စဉ်းစားရင်း ရင်ခုန်တာ)
အကြောက်ဆုံးအချိန် … လကုန်ခါနီးဘိုင်ပြတ်ချိန်
အမှတ်တရနေ့ … အမှတ်တရတွေ မှတ်ရင်းမှတ်ရင်းနဲ့ အမှတ် တရာဖြစ်နေပြီ
ဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်မယ်ဆိုရင် တောင်းမယ့်ဆု … သူငယ်ချင်းတွေ အရက်ဝိုင်းမှာ ပြောသလိုပြောချင်တယ် … “ဘာမှမလုပ်ဘဲ ကြီးပွားပါစေ”
အချစ်ဆိုတာ … ကြံတချောင်းလိုပဲ ... ချိုလည်းချိုတယ် … ကြိတ်ဖတ်လို အမှိုက်တွေလည်း ရောနေသပေါ့
အမုန်းဆိုတာ … အသံတောင်မကြားချင်ဘူး
အလွမ်းဆိုတာ … ပြောရတာကောင်းပေမယ့် တော်တော်ခံရခက်တဲ့ဝေဒနာ
သံယောဇဉ်ဆိုတာ … အလှဆုံး
ဘဝဆိုတာ … အဓိပ္ပာယ်မဖွင့်ချင်လောက်အောင်ကို … ဟောဟဲ ဟောဟဲ။ မောနေပြီ
သူငယ်ချင်းဆိုတာ … စပယ်ပန်းဖြူဖြူလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေလိုပဲ မွှေးလည်းမွှေး၊ ချစ်စရာလည်းကောင်း၊ လှလည်းလှ။
ချစ်သူဆိုတာ … မုန်းသူ မဟုတ်ဘူးပေါ့
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဒီလိုထင်တယ် … နည်းနည်းအပျင်းထူ၊ များများတွေဝေ
ကိုယ့်ရဲ့လက်စွဲဆောင်ပုဒ်က ... ရယ်တတ်အောင်သင်
အပြောချင်ဆုံးစကားတခွန်း …. ဟင့်အင်း (အားနာနာပြီး ခဏခဏ ဟုတ်ကဲ့ လုပ်ရလွန်းလို့)
Tuesday, September 09, 2008 | Labels: tag |2Comments
၈ ဂဏန်းများကို ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ကျမစွဲလန်းတယ်။ ဒီဝတ္ထုကို တကယ်က ၈ လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်မှာ တင်သင့်တာ ဖြစ်ပေမယ့် ကျမလက်ထဲမှာ ဒီစာမူက မရှိခဲ့လို့ မတင်ခဲ့ရပါဘူး။ ကျမရဲ့ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ အကျင့်ကြောင့် ဒီစာမူက ပျောက်နေတာပါ။ ဒီစာမူကလေးကို အိုင်ဒီယာမဂ္ဂဇင်းကို ပို့တုန်းကလည်း အယ်ဒီတာက ကြိုက်ပေမယ့် အယ်ဒီတာထက်ကြီးတဲ့ ဆရာကြီးတွေရဲ့ စာမူတွေဝင်ဝင်လာလို့ တနှစ်ကျော်ကျော်ကြာမှ မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဝတ္ထုလေး ပါတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီအယ်ဒီတာတောင် သူ့ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ထိပါးခံရတဲ့ အဲဒီမဂ္ဂဇင်းက စိတ်နာနာနဲ့ထွက်သွားပါပြီ။ ဝတ္ထုတိုလေး ဖော်ပြခံခဲ့ရပြီးချိန်မှာ ကျမ မေ့မေ့ပျောက် ပျောက်နဲ့ စာအုပ်ပါ ပျောက်ခဲ့ပေမယ့် ခု ဘလော့လေးလုပ်တော့ ဒီဝတ္ထုလေးကို ပြန်သတိရမိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်မှာ ရှာရမှန်းမသိဘူး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကမှ ထူးဆန်းစွာနဲ့ မဲဆောက်မှာရောက်နေတဲ့ မောင်ငယ် တယောက်က ကျမဝတ္ထုကို သူ မဂ္ဂဇင်းဟောင်း တအုပ်ထဲကနေ ဖတ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောလာပါတယ်။ အဲဒီ ဝတ္ထုကတော့ ဒီ ၈ ဂဏန်း ရက်စွဲများလို့ အမည်ရတဲ့ ဝတ္ထုလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမောင်ငယ်ကပဲ တကူးတက လူကြုံနဲ့ ကျမဆီ ဒီဝတ္ထုကော်ပီလေး ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ခေါင်းစဉ်ကို စိစစ်ရေး မလွတ်ဘူး ထင်ပေမယ့် အဖြတ်မခံခဲ့ရတာ ထူးခြားပါတယ်။ ဆရာ မောင်ချောနွယ်ရဲ့ “သစ္စာပန်း များနဲ့ မေလ” ကဗျာကို ကျမက သစ္စာပန်းများနဲ့ မေလ လို့ ပီပီကြီး အသံထွက်တော့ ကဗျာဆရာ တယောက်က သစ္စာပန်းလား သစ္စပန်းလား လို့ ကျမကို မေးခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီက အတွေးစလေးကို ယူပြီး ငယ်ငယ်က အညာခံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေးတခုကို အခြေတည်လို့ ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ဝတ္ထုလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဇွန်လထုတ် အိုင်ဒီယာမဂ္ဂဇင်း မှာ ဖော်ပြခံရတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေး ဖြစ်ကြောင်းပါ
၈ ဂဏန်း ရက်စွဲများ
တိတ်တဆိတ် အမှောင်ချလို့ ငြိမ်သက်နေမိသည် … ။ အတိတ်ကိုပြန်စဉ်းစားစမ်း။ ဒါမျိုး ဘယ်နှခါ ကြုံဖူးပြီလဲ။ အကြိမ်ကြိမ် … အကြိမ်ကြိမ် … အကြိမ်ကြိမ် …။
“ဘကြီးအောင် ညာတယ်” ဇာတ်လမ်းထဲမှ ကလေးလေးက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပင် ဖြစ်သည်။
ကလေးတယောက်ကို မညာရဘူးတဲ့ …။ ကိုယ်က ကလေးမှ မဟုတ်ပေပဲ။
သစ္စာပန်းများ လှပလွန်းလှသည် ..။ သစ္စာပန်းလား .. သစ္စပန်းလား။ ကိုယ်ကတော့ သစ္စာပန်းဟုသာ အသံထွက် သည်။ သစ္စာပန်းဆိုတာ သစ္စာရှိသောပန်းဟု ထင်ခဲ့ဖူးသည်။ ဟုတ် .. မဟုတ်တော့မသိ။ ကိုယ်တို့မြို့ကလေးမှာ ဝေတဲ့နှင်းက တခြားမြို့က နှင်းတွေနဲ့ မတူဘူးဟု ပြောဖူးသော သူငယ်ချင်းတယောက် ကိုယ့်မှာ ရှိပါသည်။ ကိုယ်တို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ကန်ရေပြင်ပေါ်မှာ ပိတ်ဆီးနေသော နှင်းများကို အတူ ငြိမ်သက်စွာ ထိုင်ကြည့် ဖူးသည်။
“တို့မြို့က နှင်းတွေက သိပ်ကိုသစ္စာရှိတယ်”
ထိုသူငယ်ချင်းက ကိုယ့်ကိုပြောသည်။ အဲဒီနှင်းတွေကြားမှာ သစ္စာပန်းတွေ ဝေဖူးသည်။ ပြီးတော့ “သစ္စာပန်း” လို့ အသံထွက်တဲ့ ကိုယ့်ကို ရယ်မောလေ့ရှိတဲ့ ကောင်မလေးတယောက်နှင့် ဆုံစည်းဖူးသည်။ ပြီးတော့ အဲဒီနှင်းမှုန် ကြားမှာ ကိုယ် တယောက်တည်း ကျန်ရစ်ခဲ့ဖူးသည်။
ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲမှ တိုက်အိမ်များ … အခါခါ ဖြိုချခံရဖူးပြီ။ စိတ်ကူးထဲမှာ မည်သူမဆို တိုက်ဆောက်ခွင့် မရှိဘူးလား။ ဆိုးတာက စိတ်ကူးတိုက်အိမ်များဟာ ပြိုကျတာမဟုတ်ဘဲ ဖြိုချခံခဲ့ရတာ ဖြစ်၏။
“ကောင်မလေးရေ … ခံနိုင်ရည်တွေ … သတ္တိတွေ … ကိုယ့်မှာ အပြည့်ရှိတယ်လို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်း ကျတော့ အလဲအကွဲပါကွယ်”
(၁) အသက် ၈ နှစ်အရွယ် ကလေးတယောက်ရဲ့ အိပ်မက်က ရုပ်ရှင်ကား တကားကို အသည်းအသန် ကြည့်ရဖို့ ဖြစ်ပါသည်။ (အဲဒီတုန်းက ခုလို တယ်လီဗီးရှင်းတွေ မရှိသေးပါ)
ကိုယ့်အစ်မ တဝမ်းကွဲတွေက ကိုယ့်ကို သူတို့နှင့်အတူ ရုပ်ရှင်လိုက်ရန် ခေါ်မည် ဆိုသောကြောင့် ကိုယ် ပျော်ရွှင်ရသည်။
“ဒီနေ့တော့ မသွားသေးဘူးနော်။ နောက်နေ့မှ သွားမှာ သိလား” ဟု ကိုယ့်ကိုပြောပြီး သူတို့ဘာသာ သွား ကြည့်လိုက်ကြသည်။ သူတို့ သွားကြတာ ကိုယ်သိသည်။ သူတို့ ရုပ်ရှင်သွားတာ မဟုတ်ဘူးဟု ပြောသော်လည်း သူတို့ ရုပ်ရှင်သွားကြတယ်ဆိုတာ ကိုယ် အသေအချာ သိနေသည်။
ကိုယ်ဝမ်းနည်းသွားသည်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်မငိုပါ။ အဲဒီအကြောင်းအရာကို ကိုယ် ဒီနေ့ထိ မှတ်မိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် တိုက်ဆိုင်မှုတွေ ရှိတိုင်းပေါ့။
(၂) အသက် ၁၈ နှစ် အရွယ်မှာ ကိုယ်က ကိုယ့်ထက် ၁၀ နှစ်ကြီးတဲ့ မမ တယောက်ကို ပိုးပမ်းနေသည်။
အဲဒီမမက ကိုယ့်ကို မျှော်လင့်ချက်တွေ တလှေကြီးပေးသည်။ ကိုယ် ပျော်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း။ တနေ့တော့ အဲဒီမမက ကိုယ့်ကို အသုံးချပြီး တခြား ယောက်ျားနောက် လိုက်ပြေးသွားသည်။ သူများတွေ ပြောမှ ကိုယ် သိရသည်။ ကိုယ် အသည်းမကွဲပါ။ ဒါပေမယ့် ငယ်ငယ်က ရုပ်ရှင်မလိုက်ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ကလေးကို ပြန်သတိရ မိသည်။
(၃) ကိုယ့်အသက် ၂၈ နှစ်
အဲဒီကာလက ကိုယ်တို့ ဘုရားကျောင်းရဲ့ လူငယ် လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေပြီ။ တခုသော ခရစ္စမတ်မှာ ခရစ္စမတ်အတွက် ပြဇာတ်လေး တပုဒ် ကိုယ်စီစဉ်သည်။
အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်စိတ်ထဲ ဒီပြဇာတ်ကို ဘယ်လို အကောင်းဆုံး တင်ဆက်မလဲ ဆိုသော စိတ်သာရှိ၏။ ကိုယ် အားကြိုးမာန်တက် လုပ်သည်။ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကို ဘုရားကျောင်းက လူကြီး၊ လူငယ် အားလုံး သိသည်။ အဲဒီ ပြဇာတ်လေးကို အားကြိုးမာန်တက် တင်ဆက်ပြီး ပြုံးပျော်စွာ ထွက်လာချိန်မှာ ကိုယ်တို့ ဘုရားကျောင်းရဲ့ အရေးပါ အရာရောက်တဲ့ လူကြီးများက စောင့်ကြိုချီးကျူးကြသည်။ လူကြီးများ အားပါးတရ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုတာ ခံရသူက ကိုယ် မဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်ဘေးမှ ကိုယ့်ကို ဝိုင်းကူပေးနေသော ကိုယ့်သူငယ်ချင်း ဖြစ်သည်။
“ဟာ မင်းရဲ့ ပြဇာတ်ကတော့ တကယ်ကောင်းပဲ” ဟု ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းကို ဝိုင်းဝန်း ချီးကျူးကြသည်။ သူငယ်ချင်း ကလည်း တပြုံးပြုံးနှင့် ပြန်နှုတ်ဆက်နေသည်။
ကိုယ် ထိုနေရာမှ တိတ်တဆိတ် ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်ဝမ်းနည်းမိသလား ကိုယ့်ဘာသာဝေခွဲမရ။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့်မှန်းမသိ။ ငယ်ငယ်က ရုပ်ရှင်မကြည့်လိုက်ရသော ရက်စွဲတခုကို ဖျတ်ခနဲ သတိရလိုက်မိသည်။
(၄) ကိုယ့်အသက် ၃၈ နှစ် အရွယ်မှာ ကိုယ့်ထက် ဆယ့်ငါးနှစ်ငယ်သော ကောင်မလေး တယောက်နှင့် ချစ်သူဖြစ် ကြသည်။ ကောင်မလေးကို ကိုယ် သိပ်ချစ်မိသည်။ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ လက်တွဲဖော်အဖြစ်လည်း အမျှော်လင့်ကြီး မျှော်လင့်မိသည်။ ကောင်မလေးကလည်း ကိုယ့်ကို သိပ်ချစ်သည်ဟု ထင်မိသည်။
“ကျမတို့ တနေ့ လက်ထပ်ကြရအောင်နော် ကိုကို” ဟုကိုယ့်ကို အမြဲပြောသည်။ ဒါပေမယ့် တနေ့မှာတော့ “ကိုကို့ကိုလေ တကယ်တော့ ကျမလုံးဝ မချစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျမ တကယ်ချစ်ရတဲ့သူကို တွေ့ပြီ ကိုကို … ကျမကို ခွင့်လွှတ်ပါနော်” ဆိုသော စကားများနှင့် ကိုယ့်ကို ချန်ရစ်ခဲ့သည်။
ကိုယ် အသည်းကွဲပါသည်။ ကိုယ့်အသည်းကို အရက်ထဲမှာ စိမ်မိသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းများ၏ “မိန်းမတွေ အများကြီးပါကွာ” ဆိုသော စကားများကို ကိုယ်ရယ်မောခဲ့သည်။ ကိုယ်က နောက်ဆုံးမှာ ကောင်မလေး မလိုက်ချင်သော လမ်းကို တယောက်တည်းပဲ ရှောက်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်၏။ ကိုယ့်အသည်းကို အရက်ထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်သော နေ့တွင် ငယ်ငယ်က … ရုပ်ရှင် … ကို ကိုယ် သတိရမိလိုက်သည်။
ကိုယ်ဝန်ကြီးနှင့် ဖြစ်နေသော ကောင်မလေးကို ကိုယ် ညင်သာစွာ ပြုံးပြလိုက်၏။ ကောင်မလေးနှင့် လက်ထပ် လိုက်သော ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကိုလည်း ကိုယ် ပြုံးပြနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်တို့ မြို့ကလေးမှာ နှင်းတွေကတော့ အရင် အတိုင်း ဝေနေဆဲ။
(၅) ကိုယ့်အသက် ၄၈ နှစ်။
ကိုယ်တို့ အလုပ်ခွင်ထဲမှာ လုပ်ငန်း အသစ်တခု လုပ်ဖို့ ဖြစ်လာသည်။ ကိုယ့်ဆရာက ကိုယ့်ကို တာဝန်ပေးသည်။ ကိုယ့်ဆရာက ကိုယ့်ကို ယုံကြည်စွာ ခိုင်းစေခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကလည်း ထိုတာဝန်ကို ကျေနပ်စွာ ခံယူသည်။ ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင်အချိန်များစွာကို ထိုလုပ်ငန်းအတွက် ကိုယ်သုံးသည်။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာကော၊ စာရွက်ပေါ်မှာပါ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆွဲသည်။ မေးသင့်သူများကို မေး။ တွေ့သင့်သူများကို တွေ့သည်။ ထိုလုပ်ငန်းထဲမှာ ကိုယ့်စိတ်ကို လုံးဝမြှုပ်နှံထားမိသည်။
နောက်ဆုံးအဆင့်အပြီးတွင် ကိုယ့်ဆရာကို ပြလိုက်သည်။ ကိုယ့်ဆရာက ထူးဆန်းစွာ ကိုယ့်အတွက် ဝမ်းနည်းစကား ဆိုသည်။
“အေးကွာ … ငါကလည်း ပါးစပ်လေးနဲ့ မင်းလုပ်လိုက်ဆိုပြီး မေ့နေတာကွ။ ပြီးခဲ့တဲ့ လကမှ နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတဲ့ ငါ့မိတ်ဆွေရဲ့ သားကို ဒီပရောဂျက်အကြောင်း ပြောပြလိုက်တော့ သူလုပ်ပေးမယ် ဆိုလို့ ငါလည်း အပ်လိုက်မိတယ်။ သူက ငွေကော ပစ္စည်းကိရိယာကော စုံလင်တာ ဆိုတော့ ခဏလေးပြီးသွားမှာကွ။ နောက်တခေါက်ပေါ့ကွာ”
ကိုယ့်ဆရာရဲ့ စကားအဆုံးမှာ ကိုယ့်ရင် ဟင်းလင်းပွင့်သွားသလို ခံစားလိုက်ရသည်။ ထိုအခါ ငယ်ငယ်က အဖြစ်အပျက်လေး တခုကို ဝမ်းနည်းစွာ အမှတ်ရလိုက်မိသည်။
(၆) ကိုယ့်အသက် ၇၈ နှစ်
ငယ်ငယ်က ရုပ်ရှင် ကိုယ့်အစ်မများ …
ပြီးခဲ့သော နှင်းတွေဝေသည့် တနေ့က ကွယ်လွန်ခဲ့သည့် ကောင်မလေး (ဒေါ်မူယာ - ၆၃ နှစ်) ၏ အုတ်ဂူပေါ်တွင် ကိုယ် သစ္စာပန်း တစည်း တင်ပေးလိုက်သည်။
ငယ်ငယ်က … ရုပ်ရှင် မလိုက်ခဲ့ရသည့် တနေ့ကို ကိုယ် မေ့လိုက်ပြီဖြစ်၏။
Tuesday, September 02, 2008 | Labels: ဝတ္ထုတို | 1 Comments